Safarka Xalaal ee Malaysia - Makhaayadaha - Masaajidyada - Hoteellada Saaxiibtinimada Muslimiinta
Malaysia waa waddan ku yaal Koonfur-bari Aasiya, jasiiradda Malay, iyo sidoo kale waqooyiga Borneo. Waddanku waa mid ka mid ah dhaqaalaha cusub ee shabeellada Aasiya, iyada oo ay soo martay horumar weyn oo xagga dhaqaalaha iyo aadanaha ah tobanaankii sano ee la soo dhaafay. Halka caasimada Kuala Lumpur waa magaalo caalami ah, hawd qoto dheer ayaa daboolaya dhulka intiisa badan.
Malaysia waxay u qaybsan tahay laba gobol oo juquraafi ah, oo badanaa loo yaqaan 'Peninsular Malaysia' iyo Bariga Malaysia. Eeg Juqraafiga wixii macluumaad dheeraad ah.
xeebta galbeed (Perlis, Kedah, Penang, Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Putra Jaya, Negeri Sembilan, Malacca)
Gobolka horumarka badan leh, ee bixiya caasimada casriga ah, Kuala Lumpur, UNESCO magaalooyinka Hidaha Adduunka ee leh gumeysiga iyo jasiiradaha Langkawi.
Gobol dhaqameedka muslimiinta ee dhaqanka badan leh, oo hoy u ah Taman Negara (National Park), jasiirado fara badan oo aan la daboolin iyo Wadada Tareenka ee Jungle, oo dabaysha ka dhex marta dhulka miyiga ah.
Waxay ka kooban tahay kaliya hal gobol, laba xeebood, beero timir aan dhammaad lahayn iyo irridda laga maro dalka Singapore.
Quusitaanka qubeyska ee jasiiradda Sipadan oo lagu daray quusitaanka muuska ee Mabul, keydka dabeecadda, xadka federaalka ee Labuan iyo buurta weyn ee Kinabalu.
Gobolka koonfureed ee bariga Malaysia. Hoyga guryaha dabaqyada dhaadheer, keymaha dhirta iyo jardiinooyinka qaranka oo ka duwan caasimada gobolka, Kuching.
Dhismooyinka caanka ah ee loo yaqaan 'Petronas Twin Towers', Kuala Lumpur
Kuala Lumpur - caasimad dhaqammo badan leh, oo ah guryo ka mid ah Petronas Twin Towers
George Town - caasimada Penang iyo magaalada labaad ee ugu weyn Malaysia, waxay caan ku ahayd qaab dhismeedkeedii xilligii gumeystaha, dadyowga dhaqamada kala duwan, cunnada iyo fanka.
Malacca - magaalada taariikhiga ah ee Malaysia oo leh qaab dhismeed qaab gumeysi ah
Ipoh - waa caasimadda Perak, oo leh magaalo taariikhi ah oo gumeysi
Johor Bahru - caasimadda Johor, iyo marinka laga galo magaalada-deriska la ah gobolka, Singapore
Kuantan - caasimadda Pahang iyo Xarunta Ganacsiga ee Xeebta Bari
Kota Kinabalu - wuxuu kudhowyahay jasiiradaha kulaylaha, keymaha roobka iyo Mount Kinabalu
Kuching - caasimada Sarawak
Miri - magaalada loo tamashle tago ee Sarawak oo ku taal meel u dhow soohdinta Brunei iyo marinka UNESCO Liiska Dhaxalka Adduunka, Gunung Mulu National Park
Cameron Highlands - waxay caan ku tahay beeraha shaaha
Jasiiradaha Perhentian (Pulau Perhentian) - Dhagaxyo dhalaalaya oo ka baxsan Xeebta Bariga wali dalxiis ballaadhan kama helin
Taman Negara - waa dhul ballaaran oo keymo-qaran ah oo ku teedsan Kelantan, Pahang iyo Terengganu
Mount Kinabalu - guriga Mount Kinabalu
Langkawi - waa jasiirado ka kooban 99 jasiiradood oo caan ku ah xeebaheeda, keymaha roobka, buuraha, mangrove estuaries iyo dabeecadda gaarka ah. Sidoo kale waa jasiirad bilaa cashuur ah
Sipadan (Pulau Sipadan) - mid ka mid ah dhibcaha ugu fiican adduunka
Redang (Pulau Redang) - jasiiradda caanka ah ee loogu talagalay dadka quusa
Tioman (Pulau Tioman) - Mar la magacaabay mid ka mid ah jasiiradaha ugu quruxda badan adduunka
Fraser's Hill - waa wakhti ku habboon xilligii gumeysiga
Malaysia waa isku dhafka adduunka casriga ah iyo ummad soo koraya. Iyada oo ay maal gashanayso warshadaha tikniyoolajiyadda sare iyo qaniga saliidda dhexdhexaadka ah, waxay noqotay waddan hodan ku ah Koonfur-bari Aasiya. Malaysia, booqdayaasha badankood, waxay soo bandhigaan iskudhaf farxad leh: waxaa jira kaabayaal teknolojiyad sare ah wax walbana guud ahaan sifiican ayey ushaqeeyaan wax kabadan ama kadhiman jadwalka, laakiin qiimayaashu wali waa kuwo macquul ka badan, dheh, Singapore. Tirada dadka ee dadka taajiriinta ah iyo kuwa saboolka ah sidoo kale waa iska muuqan karaan: tusaale ahaan, dhisme dabaq ah oo dabaq ah oo guryaha is-kaashatada laga dhisay oo laga dhisay wadada dhinaceeda hore, dukaanno badan oo soo noqnoqday ama dabaqyo. Si kastaba ha noqotee, ma heli doontid saboolnimo ba'an oo miyi ah ama isku raranno waaweyn sida meelaha kale ee Koonfur-bari Aasiya.
Marka laga hadlayo soojiidashada, Jasiiradda (Galbeedka) Malaysia waxay ka kooban tahay jasiirado leh qurux qurux badan iyo jajab soo booqdayaal ah oo laga helo xeebaha ugu caansan Thailand, buuraha dib u gurashada oo ay ku hareeraysan yihiin beero shaah, magaalooyin taariikhi ah oo xiiso leh, Cunto caan ku ah dunida, iyo casri aad u casri ah caasimada dhaqanka ee Kuala Lumpur. Bariga Malaysia waxaa ku jira keymo dhaadheer oo leh dad kala duwan oo ku nool dalkeeda iyo duurjoogta, iyo sidoo kale soojiidasho dabiici ah oo dabiici ah sida godad waaweyn, buuro qurux badan iyo goobo aad u wanaagsan oo lagu quusto Si kastaba ha noqotee, si kastaba ha noqotee, Malaysia kuma caan aha dadka ka dambeeya boorsooyinka sida meelaha kale ee Koonfur-bari Aasiya sida Thailand, Laos iyo Vietnam, qayb ahaan sababtoo ah kharashyada qaaliga ah ee sarreeya, iyo qayb ahaan sababtoo ah diinta iyo muxaafidka, inkasta oo guud ahaan dulqaadka, dhaqanka.
Fagaaraha Dutch ee Malacca
Kahor intii aysan soo bixin quwadihii gumeysiga reer Yurub, Jasiiradda Malay iyo jasiiradaha Malay waxay hoy u ahaayeen boqortooyooyin sida Srivijaya (oo caasimadoodu u dhowdahay Palembang casri ah, Sumatra, laakiin ay kujirto dhammaan Jasiiradda Malay iyo dhulal ka sii fog woqooyi heerkeeda ugu weyn) , Majapahit (oo ku taal Java, hadda qayb ka ah Indonesia, laakiin aqoonyahannada badankoodu rumaysan yihiin inay ku dareen dhammaan Jasiiradda Malay iyo inta badan xeebaha Borneo oo ka mid ah waddammada hoostooda) iyo Malacca Sultanate. Boqortooyooyinkii Srivijaya iyo Majapahit waxay arkeen faafinta diinta Hinduuga ee gobolka, ilaa maantana, in kasta oo xaqiiqda ah in Malays ay yihiin Muslimiin, haddana halyeeyo iyo caadooyin badan oo Hindu ah ayaa ka badbaaday dhaqanka Malay ee soo jireenka ah. Diinta baaxadda leh ee Islaamku waxay dhacday oo kaliya markii ay yimaadeen ganacsatadii Carbeed intii lagu jiray Saldanaddii Malacca.
Intii lagu jiray qarnigii 16aad Burtuqiisku wuxuu aasaasay gumeysigii ugu horreeyay ee Yurub ee Koonfur-bari Aasiya isagoo ka adkaaday Malacca Sultanate. Boortaqiisku wuxuu ahaa mid aan diin dulqaad lahayn oo naxariis daran, sidaa darteed Sultan of Johor wuxuu caawiyay Nederland sidii looga adkaan lahaa, Nederlandna waxay la wareegtay magaalada. Ingriiska sidoo kale wuxuu ka aasaasay gumeysigii ugu horreeyay Jasiiradda Malay ee Penang markii uu bixiyay Suldaanka reer Kedah sanadkii 1786. Ugu dambeyntiina, aagga waxaa loo kala qaybiyey dhinacyo Holland iyo Ingriis ah oo saamayn ku leh saxiixa heshiiskii Anglo-Dutch ee 1824. Heshiiskan, Nederland waxay ogolaatay inay Malacca u dhiibto Ingiriiska. oo taas beddelkeeda, Ingiriisku wuxuu ku wareejiyay dhammaan gumeysigiisii ​​Sumatra Holland. Qadka qeybinta wuxuu qiyaas ahaan u dhigmaa waxa maanta yahay xadka u dhexeeya Malaysia iyo Indonesia.
Dagaalkii Labaad ee Adduunka ka hor, Jasiiradda Malay waxaa maamuli jiray Boqortooyada Ingiriiska sida Federaal Malay States (Selangor, Perak, Negeri Sembilan iyo Pahang), oo lagu maamuli jiray hal maamul oo keliya, Gobollada Malay ee aan la soo dallacsiinin (Johor, Kedah, Perlis, Terengganu iyo Kelantan), oo mid walba loo xukumay sidii ilaalin gaar ah, iyo Degsiimooyinka Masaakiinta (oo ay ku jiraan Malacca, Penang iyo Singapore), kuwaas oo ahaa gumaysi taaj. Gumeysigan iyo maxmiyadaha waxaa si wada jir ah loogu yeeray "Malaya". British Borneo wuxuu ka koobnaa gumeysigii Ingiriiska ee Waqooyiga Borneo, Boqortooyada Sarawak, oo ay xukumi jireen qoys Ingiriis ah oo loo yaqaan "White Rajas", iyo maxmiyaddii Ingiriiska ee Brunei.
Dagaalkii Labaad ee Adduunka wuxuu masiibo ku ahaa Taliska Malayanka Ingiriiska. Jabbaanku wuxuu xaaqay labada xeeb ee Malay Peninsula inkasta oo dagaalo qaraar ay socdeen, inbadan oo kamid ah millatariga Ingriiska waxay kuxirnaayeen la dagaalanka Jarmalka Jarmalka iyo kuwa kusii nagaaday Malaya si fudud uma xamili karin weerarka Japan. Qalabkii militariga Ingiriiska ee u haray difaaca Malaya wuxuu ahaa mid duugoobay oo aan u dhigmin tikniyoolajiyadda casriga ah ee Jabaanku adeegsado, iyo labada markab ee dagaalka Ingiriiska ee kaliya ee saldhiggoodu ahaa gobolka, HMS Prince of Wales iyo HMS Repulse, ayaa ay duqeeyeen diyaaradaha Japan ee bariga. Xeebta Malaya. Markay ahayd 31 Janaayo 1942, Ingriiska dib ayaa loogu riixay jidka dib ugu noqoshada Singapore (ka dibna loo tixgaliyay inay qayb ka tahay Malaya), oo iyaduna u gacan gashay Jabbaan 15kii Febraayo 1942. Xaaladda kuma duwana Borneo, oo ku dhacday Jabbaan 1dii Abriil 1942 ka dib bilo dagaallo qaraar socday. Qabsashadii Jabbaan waxay ahayd mid naxariis daro ah, inbadan, gaar ahaan qowmiyadaha Shiinaha, way dhibtoodeen oo way halaageen intii ay qabsanayeen. Dhibaatooyinkii ugu xumaa ee ay geysteen Jabaan ayaa waxaa ka mid ahaa Dhimashadii Sandakan, iyadoo 6 ka mid ah 2,345 maxaabiis ah ay ka badbaadeen dagaalka.
Dagaalkii Labaad ee Aduunka kadib, Dowladaha Malayka ee Federated, Malay States oo aan lasiibayn iyo Degsiimooyinka Dhibaatooyinka ee Malacca iyo Penang waxaa loo xirey inay sameystaan ​​hal gumeysi oo Ingiriis ah oo loo yaqaan Malayan Union, iyadoo Singapore kala go'id si loo sameeyo gumeysi gooni ah. Midowgii Malaya, salaadiinta gobollada kala duwan waxay u dhiibeen dhammaan awooddoodii marka laga reebo kuwa arrimaha diinta ilaa taajka Ingiriiska. Si kastaba ha noqotee, diidmada baahsan ee Midowga Malayan waxay u horseeday Ingiriiska inuu dib uga fiirsado mowqifkooda, 1948-dii, Midowga Malayan waxaa lagu beddelay Xiriirka Malaya, kaas oo lagu soo celiyey boosaskii fulinta ee salaadiinta. Magaalada Borneo, White Rajas waxay Sarawak u dhiibtay taajkii Ingiriiska sanadkii 1946, taasoo ka dhigtay taajkii gumaysiga Boqortooyada Ingiriiska.
Calanka Malaysia oo ka babanaya fagaaraha Merdeka, Kuala Lumpur
31 Ogosto 1957, Malaya waxay xorriyadda ka qaadatay Ingiriiska. Saqbadhkii, Union Jack ayaa hoos loo dhigay, calanka Malayanka ayaa laga taagay meeshiisa maanta Dataran Merdeka (Fagaaraha Madaxbanaanida) gudaha Kuala Lumpur. Dadweynihii isugu soo baxay, oo uu hogaaminayay Raiiselwasaarihii ugu horeeyay ee Malaya, Tunku Abdul Rahman, ayaa kadib bilaabay inay ku heesaan "Merdeka”Toddobo jeer. Markay ahayd 16 Sebtember 1963, Malaysia waxaa lagu aasaasay iyada oo la mideeyay Malaya oo ay la midowday gumeystayaashii Ingiriiska ee Waqooyiga Borneo (oo hadda loo yaqaan Sabah), Sarawak iyo Singapore, iyadoo Brunei uu go'aansaday inuusan ku biirin. Dhowrkii sano ee ugu horreeyay taariikhda waddanka waxaa hareeyay Colaadda (Konfrontasi) - dhab ahaantii ficillo isdaba-joog ah oo gardarro ah oo ay sameeyeen Indooniisiya oo aakhirkii ku dhammaaday guuldarradeedii iyo nabad rasmi ah oo tan iyo markaas jirtay - waxayna sheeganeysaa Sabah oo ka timid Filibiin. On 9 Ogosto 1965 Singapore si rasmi ah looga saaray federaalka kadib rabshado cunsurinimo dhiig ku daatay oo dhowr ah sida SingaporeDadka Shiinaha u badan iyo Xisbiga Waxqabadka Dadka, oo uu hoggaamiyo Lee Kuan Yew (markii dambe Ra'iisul-wasaaraha muddada dheer xukumayay Singapore), ayaa loo arkay inay khatar ku yihiin xukunka Malay. Waxaa jiray qalalaase dheeri ah oo midab-kala-sooc ah 1969-kii, kaasoo horseeday is-casilaad qasab ah oo uu ku kacay Tunku Abdul Rahman; bedelkiisa waxaa loo magacaabay Tun Abdul Razak; isbeddelada ku yimid dastuurka Malaysia ee doonayey in laga hortago isbahaysiga Barisan Nasional (BN) oo uu hogaaminayo United Malays National Organisation (UMNO) in aan waligood looga adkaan doorashada qaran ee mustaqbalka; iyo bilowga Siyaasadda Dhaqaalaha Cusub, oo dooneysay inay si xoog leh kor ugu qaado danaha dhaqaale ee bulshada guud ee faqiirka ah ee Malayga ah (iyo sidoo kale dadka asal ahaan ka soo jeeda dadka aan ka soo jeedin Malay ee Bariga Malaysia) marka loo eego kuwa guud ahaan bulshada Shiinaha ee saboolka ah ee liita (kuwa ugu saboolsan kuwa waaweyn) qowmiyadda, Hindida, iyo sidoo kale illaa xad aad u ballaaran Orang Asli [dadka asalka ah] ee ku yaal Jasiiradda inta badan waa la iska indhatiray howsha)
Sannadkii 1975-kii, dad doonyood ah oo ka kala yimid badda Koonfurta Shiinaha ee Fiyetnaam ayaa bilaabay inay yimaadaan, Malaysia waxay noqotay mid ka mid ah meelaha ugu muhiimsan ee ay marka hore magan-gelyo ahaan u helaan qaxootiga Indochinese ah, laakiin guud ahaan, kaliya kuwa ka tirsan Muslimiinta laga tirada badan yahay ee Champa ayaa lagu casuumay inay si joogto ah u joogaan. Markii dambe, intii lagu gudajiray muddadii horumarka baaxadda weyn ee dhaqaalaha ee muddadii dheerayd ee raiisul wasaare Mahathir Mohammed, tiro badan oo shaqaale muhaajiriin ah ayaa laga casuumay Bangladesh, Indonesia, Hindiya, iyo dalal kale oo dhowr ah oo aagga ku yaal, iyo xitaa in ka badan oo sharci darro ku soo galay. Tani waxay sii kordhisay kala duwanaanta dadka, in badan oo shaqaalaha ahna waxaa lagu soo wariyay wargeysyada maxalliga ah inay is guursadeen dumarka maxalliga ah, laakiin waxay sidoo kale horseeday isku dhac bulsheed maadaama rag badan oo reer Malaysia ah ay ka caroodeen tartanka, halka dhaqaalahana uu ku tiirsanaa soo galootiga Shaqaalaha in ay qabtaan shaqooyinka inta badan dadka reer Maleysiya ma aysan dooneyn in ay qabtaan, hadda maadaama heerka noloshooda uu ka sareeyo, inta badan dadka reer Maleysiya sidoo kale ma aysan dooneynin in ay si joogto ah u nuugaan tiro aad u tiro yar oo suuragal ah oo aan xad lahayn oo ka mid ah dadka saboolka ah ee ka imanaya waddamada ugu tirada badan gobolka. . Muhaajiriinta qaarkood waa la ceyriyay oo xitaa waa la ganaaxay xadgudubyada socdaalka, laakiin arrinta weligeed si dhab ah looma xallin.
Malaysia waa boqortooyo dastuuri ah oo federaal ah oo ka kooban 13 gobol iyo 3 dhulal federaal ah, oo uu magacawdo madaxwaynaha (Yang di-Pertuan Agong, shiday Paramount Ruler), oo booskiisu ku wareego taliyayaasha 9-ka dowladood ee boqortooyada Malaysia shantii sanoba mar, isagoo siiya Malaysia nidaam siyaasadeed oo u gaar ah boqortooyada wareega. Boqorka hadda, Tuanku Abdullah oo ka yimid Pahang, waxaa loo dhaariyay xafiiska 31 Jan 2019 waxaana waqtigiisu ku egyahay 31 Jan 2024.
Dowladda Malaysia waxay inteeda badan ku dhisan tahay nidaamka Westminster ee Ingiriiska, oo ka kooban baarlamaan qaran oo laba aqal ka kooban, iyadoo mid kasta oo ka mid ah gobollada ay sidoo kale leeyihiin min hal aqal oo u gaar ah Dewan Undangan Negeri (Golaha Sharci dejinta Gobolka). Aqalka hoose, oo loo yaqaan kan Dewan Rakyat (Hoolka Dadka) waxaa si toos ah u doorta dadka. Aqalka sare, oo loo yaqaan kan Dewan Negara (Hoolka Qaranka), wuxuu ka kooban yahay 26 xubnood oo ay doorteen dowlad-goboleedyada, iyadoo gobol walba uu leeyahay 2 wakiil, halka xubnaha harayna uu magacaabayo boqorka. Madaxa dowladda waa ra'iisul wasaaraha, oo ah hoggaamiyaha xisbiga ee xisbiga guuleystay ee aqalka hoose. Doorashada 2018, mucaaradka Pakatan Harapan Isbahaysiga (PH), oo uu hoggaaminayo ra'iisul wasaarihii hore, Mahathir Mohamad, ayaa guul lama filaan ah ka gaaray kooxdii muddo dheer xilka haysay ee United Malays National Organisation (UMNO) Barisan Nasional Isbahaysiga (BN), oo xukunka si isdaba joog ah u hayay tan iyo 1973, kuna guulaystay isbahaysi kale oo UMNO-hogaamiso oo xukumayay tan iyo xorriyadii.
Ficil ahaan, boqorka ayaa kaliya madax magac u yaal ah, halka ra'iisul wasaaraha uu yahay kan awoodda ugu badan ku leh dowladda.
Malaysia waxay ka kooban tahay laba gobol juqraafiyeed, Peninsular Malaysia iyo East Malaysia, oo ay kala go'een Koonfurta Shiinaha.
Malaysian Peninsular (Semenanjung Malaysia) wuxuu fadhiyaa dhammaan Jasiiradda Malay ee u dhexeysa Thailand iyo Singapore, waxaana sidoo kale loo yaqaan West Malaysia (Malaysia Barat) ama Malaya yar oo qadiim ahTanah Melayu). Waxay hoy u tahay tirada badan ee shacabka Malaysia, caasimaddeeda iyo magaalada ugu weyn Kuala Lumpur, oo guud ahaan ka horumarsan xagga dhaqaalaha. Jasiiradda Maleysia waxay ka kooban tahay bannaanka labada dhinac ee Xeebaha Bariga iyo Galbeedka, oo midba midka kale uu u kala fogeeyay buur kala fog oo loo yaqaan Banjaran Titiwangsa, iyada oo Xeebta Galbeed ay ka dad badan yihiin isla markaana guud ahaan aad uga horumarsan tahay Xeebta Bariga.
Waxaa lakala fogay 800 km dhanka bari ee Jasiirada Peninsular Malaysia Bariga Malaysia (Malaysia Timur). Bariga Malaysia waxay degtaa waqooyiga saddexaad ee jasiiradda Borneo, oo ay la wadaagto Indonesia iyo Brunei yar. Inta badan horumarka ka jira Bariga Malaysia wuxuu ku yaallaa hareeraha magaalooyinka Kuching, Miri iyo Kota Kinabalu. Ka baxsan magaalooyinka waaweyn iyo magaalooyinka yaryar waxaa kaymo aan la dhaafi karin ah oo ay ugaadhsatada madaxdu mar ku meeraysan jireen iyo bannaanka xeebta oo u fuulaya buuro. Bariga Malaysia waxay hodan ku tahay kheyraadka dabiiciga ah waxayna aad ugu badan tahay Malaysia dhexdeeda warshadaha iyo dalxiiska.
Malaysia waa bulsho dhaqamo badan leh. Halka Maleysku ay yihiin aqlabiyad 52%, 27% reer Malaysiya waa Shiine (kuwaas oo si gaar ah uga muuqda magaalooyinka), 9% waa Hindi, 12% waxay xubno ka yihiin dadka Aborijiniska (oo badanaa loo yaqaan) Orang Asli, Malay oo loogu talagalay "Dadka Asalka ah"), waxaana jira koox kooxeedyo kaladuwan oo ah 1.5% "kuwa kale", oo ay ku jiraan bulshooyinka Thai ee ku nool gobollada xudduudaha waqooyiga iyo qabiilka Bortuqiiska ee Malacca. Dadka intiisa badan (oo ay kujiraan gebi ahaanba Malays, iyo sidoo kale tiro yar oo Hindi ah) waxay u hoggaansamaan Islaamka, diinta rasmiga ah, waxaana jira dad laga tiro badan yahay oo ku dhaqma diinta kiristaanka, Budhisnimada, Taoism, Hinduuga, Sikhism iyo Animism.
Dhaqanka & Dhaqanka Malaysia
Malaysia waxay la wadaagtaa dhaqanno badan deriskeeda, Indonesia, Singapore iyo Brunei taariikhdooda guud awgeed. Maaddaama boqortooyooyinkii ugu horreeyey ee ka soo ifbaxay gobolka ay ahaayeen boqortooyooyin Hindu ah oo saameyn badan ku leh Hindiya, Dhaqanka Malaygu wuxuu leeyahay saameyn badan oo Hindi ah. Tani waxay aad ugu muuqataa cunnada Malayga iyada oo aad u culus isticmaalka curry, in kasta oo la adeegsanayo maxalliga halkii laga isticmaali lahaa dhir udgoonkii Hindida, taas oo macnaheedu yahay in kalluunka Malaygu inta badan leeyihiin dhadhan gaar ah oo maxalli ah oo ka duwan dhiggooda Hindiya. Dadka laga tirada badan yahay ee Malaysia waxay sidoo kale sii wadaan inay ilaashadaan dhaqankooda u gaarka ah, iyadoo bulshada Shiinaha iyo Hindida ay sii wadaan inay ilaashadaan dhaqamada laga keenay dhulkoodii awoowayaashood.
Mid ka mid ah astaamaha muuqda ee dhaqanka Malaysia waa dabaaldegyada xafladaha iyo munaasabadaha kala duwan. Sannadka waxaa ka buuxa nashaadyo midabbo leh, farxad iyo xamaasad leh. Qaarkood waa kuwo diin leh oo qaaliya laakiin kuwa kale waa kuwo firfircoon, dhacdooyin farxad leh. Mid ka mid ah waxyaabaha xiisaha leh ee xafladaha waaweyn halkan waa caadada 'guriga furan'. Tani waa marka dadka reer Malaysiya ee dabaaldegaya xafladda ay ku casuumaan asxaabta iyo qoysaska inay ka yimaadaan guryahooda qaar ka mid ah cuntooyinka macaan iyo is weheshiga.
Dhaqamada kala duwan ee Maleesiya waxay u dabaaldegaan ciidaha kaladuwan, laakiin kuwa laga fiirsado guud ahaan dalka waa ciidaha Islaamka, gaar ahaan bisha soonka ee Ramadan. Inta lagu guda jiro 29 ama 30 maalmood, muslimiintu way iska daayaan cunida, cabitaanka, sigaarka iyo galmada min waaberiga ilaa qorrax dhaca. Dadka muslimiinta oo dhami ma wada raacaan dhaqanka, ama waxay sii wadaan soonka bisha Ramadaan oo buuxda, laakiin badankood waxay sameeyaan dadaal aad u culus. Uurka, naas nuujinta ama haweenka caadada qaba looma filayo soon, sidoo kale waayeelka, kuwa itaalka daran, ama socotada. Dadku waxay kacaan goor hore intaan qorraxdu soo bixin oo ay wax cunaansahuur), oo aad hore u kacdaa si aad guriga ugu laabato waqti aad ku soonto (afurinta) qorrax dhaca.
Dhamaadka bisha waa iidda Ciid Ciid-Fitr, oo loo yaqaan maxalli ahaan Hari Raya Puasa or Aidilfitri, markii dad badan oo deegaanka ah ay hal ama labo usbuuc u qaataan 'balik kampung' ama ay ku laabtaan magaalooyinkoodii si ay ula kulmaan qoyskooda iyo asxaabtooda. Iyadoo la raacayo, tani waa mid ka mid ah marar badan sanadkii marka magaalooyinka waaweyn ay jecel yihiin Kuala Lumpur ma laha ciriiri taraafiko.
Iid kale oo muhiim ah waa ciidaha muslimiinta ee Ciid Ciid-Adxaa, oo loo yaqaan maxalli ahaan Hari Raya Xaaji or Ceydiladha. Waa inta lagu gudajiro ciidaan muslimiintu gudanayaan waajibaadka Xajka ama xajka. Masaajidada maxaliga ah, lo'da iyo ariga waxaa ku deeqa kuwa aaminka ah waana la huray, kadibna hilibka ayaa loo wada siiyaa dadka oo dhan. Dib u midoobida qoysaska ayaa sidoo kale loo dabaaldegaa inta lagu jiro xafladaha kale ee waaweyn marka dadka deegaanku sida caadiga ah ay xirtaan dhar dhaqameed iyo ganaax maadaama xafladahaani ay yihiin wax muhiim u ah bulshada Malaysia.
Inta lagu jiro bisha Ramadaan, dadka aan Muslimka ahayn waxaa laga filayaa inay tixgeliyaan kuwa sooman. Kuwa aan Muslimka ahayn, iyo sidoo kale muslimiinta safraya (musafir), waa laga dhaafay soonka laakiin waa edeb in laga fogaado in wax la cuno ama wax lagu cabo meel fagaare ah. Nidaamyada iskuulada dowlada ayaa sidoo kale looga baahan yahay dadka aan Muslimka aheyn inay ka waantoobaan inay wax ku cunaan dadka sooman hortooda. Makhaayado badan ayaa la xidhaa inta lagu jiro maalinta iyo kuwa sii furan waxay ilaaliyaan muuqaal hoose. Ganacsatada safarka ah waxay ogaan doonaan in arimuhu ay uga dhaqso badan yihiin sidii caadiga ahayd. Ujeedka socdaalka ajaanibta waa suuqyada bisha Ramadaan ee magaalo kasta iyo magaalo kasta, oo ay ka muuqdaan dhaqdhaqaaqyo iyo cunno aad u fara badan. Hoteellada iyo maqaayadaha ayaa sidoo kale soo jiidaya dhammaan joogsiyada si ay u dhigaan faafitaanno ballaaran oo cunno ah oo loogu talagalay xafladaha soon-jabinta. Inta lagu jiro bisha Ramadaan, cuntada dhamaadka soonka waxaa badanaa loo tixgeliyaa inay tahay iidyo waaweyn. Silsiladda cunnada degdega ah ee adduunka oo dhan McDonald's ayaa caan ku ah qabashada dhowr iidood oo aad wada cuni karto bisha Ramadaan inta lagu jiro bisha.
Ciidaha kale ee waaweyn waxaa ka mid ah Chinese sanadka cusub (qiyaastii Janaayo / Febraayo), Deepavali or Diwali, Iiddii Hindida ee nalalka (qiyaastii Oktoobar / Nofeembar), ciidda Buddhist ee Wesak (qiyaastii Maajo / Juun), iyo Christmas (25 Diseembar). Intii lagu jiray Sannadka Cusub ee Shiinaha, George Town iyo Ipoh waxay noqdeen magaalooyin waaweyn maadaama dad badan oo Shiineys ah oo deegaanka ka shaqeeya oo ku nool KL ay halkaas ka yimaadeen. Si kastaba ha noqotee xaaladdan si tartiib tartiib ah ayey isu beddeleysaa, maadaama dad aad u tiro badan ay sameynayaan Kuala Lumpur magaaladooda. Inta booqashada lagu jiro xafladaha noocan oo kale ah, dadka safraya waxay awoodi doonaan inay la kulmaan damaashaadyo badan oo cajaa'ib leh, laakiin dhinaca kale ayaa ah in dukaamo / cunnooyin qowmiyadeed oo badan la xiri doono. Xulashada ugu fiican ayaa ah inaad booqato inta lagu jiro mudada yar ka dib labada maalmood ee ugu horreeya xafladda weyn (Hari Raya / Sannadka Cusub ee Shiinaha), marka dukaamadu furmi doonaan, niyadda xafladduna wali ma dhiman.
Dabaaldeg kale oo weyn ayaa ah Deepavali, oo ay u dabaaldegeen Hindus-ka Maleysia sida ciida iftiinka asal ahaan ka soo jeeda qadiimiga Hindiya iyo mid ka mid ah dabaaldegyada dhaqanka ugu waaweyn. Malaysia gudaheeda, dadka maxalliga ah waxay ku dhaqmaan dhaqankan iyagoo xiranaya dhar cusub iyo helitaanka hadiyado lacageed oo calaamadeed Dhaqankan waxaa la qabsaday dhammaan dadka reer Malaysia iyadoon loo eegin diintooda. Waxay u qaybiyaan baakado cas ama iyo bud inta lagu jiro Sannadka Cusub ee Shiinaha, xirmooyinka cagaaran ama 'duit raya' ee Hari Raya Aidilfitri iyo xirmooyin midabbo badan leh xilligii Deepavali.
Qaar ka mid ah ciidaha gaarka u ah Maleysia ee xusuus qorka waxaa ka mid ah Bandhig Faneed dhammaadka Maajo sannad kasta iyoPesta Gawai ' horaantii Juun, labadaba xaflado mahadnaq ah ayaa lagu qabtay Malaysia.
Thaipusam waa xaflad Hindu ah oo dhacda Janaayo ama Febraayo waana mid ka mid ah dhacdooyinka ay tahay in la arko. Socodka ugu ballaaran ee dalka wuxuu ka dhacaa Godka Batu, waqooyiga Kuala Lumpur. Ragga cibaadada leh waxay wataan meelo allabari oo la qurxiyey ama kavadi duulimaad ah 272 tallaabo oo dhanka macbudka ah, waxaas oo dhan iyada oo waliba wata waran diimeed iyo qabatooyin laga muday dusha sare ee jidhkooda. Awoodda waxaa loo aaneeyaa faragelinta rabbaaniga ah iyo xamaasadda diinta. Dumarka u adeega haweenka ayaa ku biiraya socodsiinta dheryo caano ah oo madaxa saaran.
The cimilada Malaysia waa dhulbaraha. Monsoon-waqooyi-bari (Oktoobar ilaa Febraayo) waxay daadad galisaa Borneo iyo Xeebta Bari ee Jasiiradda Peninsula roobka oo inta badan sababa daadad, halka Xeebta Galbeed (gaar ahaan Langkawi iyo Penang) baxsad aan la gaarin. Monsoon-ka koonfur-galbeed dabacsan (Abriil ilaa Oktoobar) ayaa rogaya qaabka. Qaybaha koonfureed iyo kuwa dhexe ee Jasiirada Maleysia, oo ay kujirto xasilooni daro Kuala Lumpur, labaduba way soo gaadhaan laakiin xitaa xilliyada roobka, qubeysyadu waxay u muuqdaan kuwo xoog badan laakiin kooban.
Malaysia waxay ku dhowdahay dhulbaraha, sidaa darteed cimilada diiran ayaa la damaanad qaadayaa. Heerkulku guud ahaan wuxuu u dhexeeyaa 32 ° C (90 ° F) duhurkii ilaa qiyaastii 26 ° C (79 ° F) saqda dhexe. Laakiin sida inta badan wadamada Koonfur-bari Aasiya, maalmaha qorraxda ee Malaysia waxaa hakad galiya xilliga monsoon sanad kasta, heerkulka habeenkiina wuxuu ku dhufan karaa heer hoose oo qiyaastii ah 23 ° C (73 ° F) maalmaha roobka.
Heerkulku wuxuu u muuqdaa inuu ka qabow yahay meelaha buuraleyda ah, iyadoo kuwa la midka ah Genting Highlands, Cameron Highlands iyo Fraser Hill ay leeyihiin heer kul kulma illaa 17 ° C (63 ° F) habeenkii illaa 25 ° C (77 ° F) maalintii. Buurta Kinabalu waxaa lagu yaqaan inay leedahay heerkul ka hooseeya 10 ° C (50 ° F).
Entry waa la diidi doonaa ku socota muwaadiniinta reer Israel oo wata baasaboor Israel ah mooyee haddii aadan haysan warqad ogolaansho ah oo ka socota Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Malaysia. Intaa waxaa sii dheer muwaadiniinta reer Israel waxay u baahan yihiin tigidh horay loo sii wado waxaana laga codsan doonaa inay mid iibsadaan ama noqdaan diiday gelitaanka. Malaysia welwel kama qabin baasaboorada muwaadiniinta kale ee muujinaya tigidhada gelitaanka iyo / ama fiisooyinka laga helo Israel.
Khariidad muujineysa shuruudaha fiisaha ee Malaysia, oo leh waddamo cagaaran, bunni iyo bunni khafiif ah oo leh fiiso la'aan fiiso; iyo wadamada buluuga ah ee leh E-Visa
Jinsiyadaha badankood waxay gali karaan Malaysia fiiso la'aan waxayna joogi karaan Malaysia 14 ilaa 90 maalmood, iyadoo kuxiran dhalashadooda. Tixraac Wasaaradda Arrimaha Dibadda wixii macluumaad ah ee ku saabsan shuruudaha fiisaha iyo muddooyinka joogitaanka. Gobollada Bariga Malaysiya ee Sabah iyo Sarawak mid kastaa wuxuu ilaaliyaa nidaamkiisa socdaal ee u gaarka ah iyo kontaroolo gooni ah: xitaa dadka reer Malaysia ee gobollada kale ka yimaada waxay u baahan yihiin baasaboor ama MyKad markay yimaadaanba.
Kuwa doonaya inay u soo galaan Malaysia ujeedooyin aan ka ahayn booqashada bulshada ama ganacsiga wali waxay u baahan yihiin fiiso xilli kasta (marka laga reebo muwaadiniinta Mareykanka ee u soo gala ujeedada wax barashada) laakiin halkan ka eeg "daldaloolada".
Kuwa u baahan fiiso ay ku galaan Malaysia waxay awoodi karaan inay mid ka codsadaan safaaradda Ingiriiska, guddi sare ama qunsuliyad dalkooda ah haddii uusan jirin jago diblomaasiyadeed oo Malaysia ah. Tusaale ahaan, safaaradaha Ingiriiska ee Belgrade, Guatemala City, Pristina iyo Sofia waxay aqbalaan codsiyada fiisaha Malaysia (liistadani waa ma dhammaystiran). Meelaha dibloomaasiyadeed ee Ingiriisku waxay ka qaadaan £ 50 si ay uga baaraandegaan dalabka fiisaha Malaysia iyo 70 extra dheeraad ah haddii maamulka Malaysia ka dalbado in loo gudbiyo dalabka fiisaha. Mas'uuliyiinta Malaysia sidoo kale waxay go'aansan karaan inay lacag dheeraad ah qaadaan haddii ay si toos ah ula xiriiraan codsadaha.
Waqti dheeri ah fiisada waxay keenaysaa US $ 10, € 7.50 ama RM30 ganaax maalintii. Si kastaba ha noqotee, waa wax iska fudud in laga fogaado xad-dhaafka fiisada iyadoo la sameynayo “fiiso orod” dal deris ah oo dhinaca dhulka ah ama duulimaad jaban. Malaysia ayaa soo rogi karta karaamayn ciqaab ahaan fiiso xad-dhaaf ah
Inkasta oo muwaadiniinta reer Bhutan, Hindiya, Myanmar, Nepal, Pakistan iyo Siri Laanka sida caadiga ah waxay u baahan yihiin fiiso, way iskaga gudbi karaan isla garoonka diyaaradaha ilaa 120 saacadood haddii ay yimaadaan kana dhoofaan isla diyaarad, kana degaan Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Kuching, Penang ama Senai (oo u dhow Johor Bahru) oo soo bandhig tikit diyaaradeed oo dhab ah.
Muuqaalka Langkawi diyaarad
Shirkadaha xambaara Malaysia Airlines (MAS) wuxuu leeyahay caymis ballaaran gudaha Aasiya, iyo sidoo kale duulimaadyo qaaradaha isaga kala goosha Australia, New Zealand iyo Boqortooyada Ingiriiska, oo si joogto ah ugu jira qiimeynta tayada shirkadaha diyaaradaha. Qaade qiimo jaban AirAsia iyo shirkadda walaasheed, AirAsia X, hadda wuxuu isku xiraa dalal mar walba sii ballaaranaya oo ay ka mid yihiin Australia, Shiinaha, Kamboodiya, Hong Kong, Hindiya, Indonesia, Laos, Macau, New Zealand, Filibiin, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Myanmar iyo Vietnam. Shirkada diyaaradaha ee Emirates ayaa iyaduna ka duusha magaalooyinka badankood Kuala Lumpur sii maraya Dubai, duulimaadyada tagaya Perth, Australia, Joogasho kooban ku samee KLIA.
AirAsia, ☎ + 60 3 8775-4000 (khadka tooska ah ee Malaysia gudaheeda: 1 300 88 9933)
Malaysia Airlines, ☎ + 60 3 7846-3000 (khadka tooska ah ee Malaysia: 1-300-88-3000)
Diyaaradda Emirates ☎ + 60 36 207 4999
Duulimaadyada caalamiga badankood waxay ka degaan Kuala Lumpur Gegada Diyaaradaha Caalamiga (KLIA) (). KLIA tii ka horeysay, ee Gegada Diyaaradaha ee Sultan Abdul Aziz Shah () Subang ku dhow Kuala Lumpur waxay qabataa diyaaradaha kireysan iyo kuwa loo yaqaan 'turboprop' ee loogu talagalay hawlwadeenada gobolka Firefly iyo nasiib wanaagsan, ☎ + 60 3 7846 8228 (tikidhada kaliya) ;, ☎ + 60 3 2145 2828. Eeg Kuala Lumpur Gali qaybta loogu talagalay macluumaadka garoonka oo faahfaahsan.
Gegooyinka diyaaradaha ee kale ee leh duulimaadyo aad u tiro badan oo tagaya gobollada waa Kota Kinabalu (Sabah), Penang, Kuching (Sarawak), Langkawi iyo Johor Bahru. Qaar badan oo ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee Malaysia ayaa leh adeegyo Singapore-Changi oo loo maro AirAsia ama Firefly.
Tareen ugu raac Malaysia
Ku socda / ka yimaada Thailand: Adeegyada tareenka tooska ah ee tooska ah ee ay maamusho Tareenka Gobolka ee Thailand waxay isku xiraan Bangkok (Thailand) iyo Butterworth, halka Keretapi Tanah Melayu (Tareenada Malaysia) ay tareenno dhex marayaan Hat Yai (Thailand) iyo Kuala Lumpur (Malaysia). Labada tareenba waxay ka gudbaan xadka Padang Besar halkaas oo qaababka socdaalka ee Thai iyo Malaysia dhammaantood si habboon loogu sameeyo saldhigga. Waxa kale oo jira waddo bari ka yar oo Hat Yai ka timaadda oo tagta magaalada xadka ku taal ee Thailand ee Sungai Kolok, laakiin ma jiraan tareenno loo maro tareennada u dhow saldhigga Malaysia ee Wakaf Bahru (oo u dhow Kota Bharu).
Ku socota / ka yimid Singapore: Waxaa jira adeeg tareen bas ah oo soconaya todobo jeer waddo kasta inta lagu jiro subaxa iyo fiidkii muddooyinka laga bilaabo Saldhigga Tareenka ee Woodlands (waqooyiga Singapore) ilaa JB sentral ee Johor Bahru, qiimaha MYR5 wuxuu ka imaanayaa dhinaca Malaysia iyo SGD5 dhanka Singapore. Tareennada caadiga ah ee isdhaxgalka kadib waxay isku xirmaan Johor Bahru Gemas iyo Tumpat, oo u dhow Kota Bharu. Had iyo jeer isma waafaqsana waqtiyada xamuulka, sidaa darteed u diyaar garow wakhti sugitaan dheer ama ka hel bas qorshe bas ah haddii aad seegto baska. Tareennada subaxnimada hore ee Singapore iyo tareennada fiidkii dambe ee Malaysia ayaa badanaa la buuxiyaa maalmaha shaqada oo socodka taraafikada ayaa is beddela maalmaha fasaxa. Boos celinta khadka tooska ah ee barta internetka ee KTMB waxaa laga yaabaa inay keydiso kursi qaali ah dhib la'aan. Markaad ka safreyso Singapore una aadayso Malaysia, baaritaannada socdaalka ee Singapore iyo Malaysia waxaa lagu sameeyaa Saldhigga Tareenka ee Woodlands ka hor inta aan tareenka loo raacin Malaysia. Jihada ka soo horjeedka, hubinta soogalootiga Malaysia waxaa lagu sameeyaa JB Sentral ka hor inta aan la degin, halka hubinta soogalootiga ee Singapore lagu qabto imaatinka Woodlands.
Basaska / tababarayaasha masaafo dheer taga Malaysia waxay ka baxaan Brunei, Indonesian Borneo, Singapore iyo Thailand. Fadlan eeg bogagga magaalada ee khuseeya wixii faahfaahin dheeraad ah.
Brunei - waxaa jira basas taga Miri iyo Kota Kinabalu, oo ka tagaya dhinaca hore ee magaalada hoose ee Bandar Seri Begawan. Waxa kale oo jira basas aada Limbang.
Indonesia - basaska tooska ah waxay ka shaqeeyaan inta u dhaxeysa Pontianak ee Galbeedka Kalimantan iyo Kuching ee Sarawak.
Singapore - shirkado badan oo basas ah ayaa ka shaqeeya waddooyinka tooska ah ee ka imanaya Singapore illaa meelo kala duwan oo Malaysia ah, oo ay ku jiraan Malacca, Kuala Lumpur, Penang, magaalooyinka Xeebta Bariga iyo xitaa xaafadaha Kuala Lumpur ee Petaling Jaya iyo Subang Jaya. Basaska isdaba joogga ah ayaa sameeya wadada gaaban ee udhaxeysa Singapore iyo Johor Bahru, waxaadna badbaadin kartaa xoogaa lacag ah adoo u bedelaya JB's Larkin terminal una badalaya bas raqiis ah halkii aad ka qaadan laheyd bas toos ah oo qaali ah.
Thailand - dhowr shirkadood ayaa ka shaqeeya adeegyada laga bilaabo Kuala Lumpur iyo magaalooyin kale oo ku yaal Malaysia illaa Hat Yai ee koonfurta Thailand, halkaas oo xiriir toos ah laga heli karo Bangkok iyo meelo kale oo badan oo Thai ah.
Koontaroolka Bukit Kayu Hitam, ee xadka Thai
Isgoysyada dhulku waa suurta gal koonfurta Thailand iyo Singapore galay Malaysia, iyo sidoo kale Brunei iyo Kalimantan (dhinaca Indonesia ee Borneo) ilaa Sarawak. Oggolaanshaha Darawallada Caalamiga ah (IDP) ayaa loo baahan yahay. Ka eeg magaalada ama bogagga gobolka wixii macluumaad faahfaahsan.
Brunei - isgoysyada ugu waaweyn waa Sungai Tujoh wadada Miri, Sarawak, ilaa Bandar Seri Begawan (Brunei), iyo Kuala Lurah-Tedungan isbaaro loo isticmaalo taraafikada safarka inta udhaxeysa Bandar Seri Begawan iyo Limbang ee Sarawak. Waxa kale oo aad marin ka heli kartaa degmada Bangar ee Brunei adoo ka soo raacaya Limbang adoo maraya barta kantaroolka ee Pandaruan (Puni dhinaca Brunei) iyo Lawas adigoo sii maraya Trusan (Labu dhinaca Brunei).
Indonesia - isgoyska ugu weyn waa meesha Tebedu-Entikong isbaaro dhigta wadada weyn ee Kuching-Pontianak. Isgoysyada kale ee yar yar ee ay isticmaalaan dadka maxalliga ahi daruuri uma aha ajaanibta.
Singapore - labada isgoys waa Sababta kaas oo isku xidha Johor Bahru Woodlands Singapore, iyo Malaysia-Singapore Xidhiidhka Labaad kaas oo isku xira Iskandar Puteri iyo Tuas oo ku yaal Singapore. Fiiri Johor Bahru Gali qaybta iyo Singapore Gali qaybta wixii faahfaahin dheeraad ah.
Thailand - isbaarooyinka caalamiga ah (oo leh magaalooyinka Thai ee qaansada) Wang Kelian (Satun) iyo Padang Besar (Padang Besar) oo ku taal Perlis, Bukit Kayu Hitam (Sadao) ee Kedah, Pengkalan Hulu (Betong) gudaha Perak, iyo Rantau Panjang (Sungai Kolok) oo ku sugan Kelantan. Socdaalka Thai muddo dheer ayaa lagu yaqaanaa inuu dalbado laaluush RM2 / 20 Thai Baht qofkiiba ah si uu kuugu dhufto ama udhaco, in kasta oo ay jireen xoogaa ciqaab ah oo tan ku saabsan.
Gaar ahaan haddii laga soo galayo Singapore, Hubso in Baasaboorkaaga lagu shaabadeeyey Immigraysiyada Malaysia kahor intaadan ka bixin gawaarida. Waxaa jira warbixino sheegaya in saraakiisha socdaalka ay “iloobeen” inay ku dhuftaan baasaboorada dadka safarka ah markay yimaadaan, safarkaas oo kale waxaa lagu xiri doonaa, xabsi iyo ganaaxyo dhowr kun oo ringgit ah markay isku dayayaan inay ka baxaan Malaysia.
Ferries waxay isku xiraan meelo kala duwan oo Malaysia ah iyo Sumatra oo ku taal Indonesia iyo koonfurta Thailand, Sarawak iyo Brunei, iyo Sabah oo leh Bariga Kalimantan ee Indonesia iyo Mindanao ee Filibiin. Doomaha raaxada ayaa sidoo kale ka socda Singapore iyo mararka qaarkood Phuket (Thailand) ilaa Malaysia.
Brunei - doomaha maalin kasta u dhexeeya Muara Ferry Terminal ee Brunei iyo jasiiradda Labuan iyo Lawas ee Sarawak. Doomaha dheereeya, inta badan subaxa, sidoo kale waxay maraan inta u dhexeysa Bandar Seri Begawan jetty iyo Limbang, Sarawak.
Indonesia - qodobbada ugu waaweyn ee ka boodaya Indonesia waa Jasiiradaha Riau ee Batam, Bintan iyo Karimun; Dumai, Medan iyo Pekanbaru oo ka tirsan dhul weynaha Sumatra iyo sidoo kale Nunukan oo ku taal Bariga Kalimantan. Doomaha isku xira Batam iyo Batu Pahat iyo Johor Bahru; Bintan oo la socda Johor Bahru; Karimun oo ay weheliso Batu Pahat iyo Kukup oo jooga Johor; Dumai oo leh Malacca, Muar oo ku taal Johor, Port Dickson (oo ku taal Negeri Sembilan) iyo Port Klang, oo ah dekedda Kuala Lumpur; Pekanbaru oo leh Malacca. Doomaha maalinlaha ah waxay sidoo kale isku xiraan Nunukan iyo Tawau oo ku taal Sabah. Waxaa sidoo kale jira isgoysyo yaryar sida inta udhaxeysa Bengkalis ee Riau iyo Batu Pahat; Sumatra iyo Malacca iyo Muar oo ku yaal Johor; iyo Tanjung Balai Asahan oo ku taal Woqooyiga Sumatra iyo Port Klang, oo ah dekedda Kuala Lumpur.
Filibiin - doomaha u kala goosha Jasiiradda Zamboanga iyo Sandakan, Sabah.
Singapore - doonyaha rakaabka ee maalinlaha ah waxay maraan inta udhaxeysa Changi Point iyo Pengerang, inta udhaxeysa Tanah Merah iyo Sebana Cover Resort, iyo sidoo kale inta udhaxeysa Changi iyo Tanjung Belungkor, dhamaanteed Johor. Eeg Singapore Gali qaybta wixii faahfaahin ah.
Thailand - afar markab maalin kasta (waxaa loo dhimay saddex Ramadaan dhexdooda) inta u dhaxeysa Tammalang ee Satun iyo Kuah oo ku taal Langkawi, Malaysia. Doomaha gawaarida ayaa ka shaqeeya inta u dhaxeysa Ban Taba oo u dhow Tak Bai oo ka tirsan gobolka Narathiwat iyo Pengkalan Kubur oo ka tirsan Kelantan, Malaysia, halka doonyaha rakaabka ay ku ordaan inta u dhaxeysa Ban Buketa oo ka tirsan gobolka Narathiwat iyo Bukit Bunga oo ka tirsan Kelantan.
Waa suurtagal in laga soo galo Malaysia lugta dhanka Wang Kelian iyo Padang Besar (labadaba Perlis), Bukit Kayu Hitam (Kedah), Pengkalan Hulu (Perak) iyo Rantau Panjang (Kelantan). Ka gudbaya Singapore galay Malaysia lug ahaan adoo ka talaabaya Causeway ama Second Link hadda waa sharci darro.
Si weyn ayaan ugu mahadcelinayaa side miisaaniyadda AirAsia, Malaysia waxaa hareereeyay mareeg duulimaadyo la awoodi karo oo leh qiimayaal "xayeysiin" ah oo ka bilaabanaya RM9 duulimaadyada horay loo sii ballansaday. Duulimaadku waa ikhtiyaarka kaliya ee wax ku oolka ah ee loogu safri karo inta u dhexeysa Jasiiradda Malaysia iyo Borneo, iyo sidoo kale gaarista qaar ka mid ah meelaha fogfog ee Borneo. Shirkadda Gobolka Malaysia Airlines sidoo kale wuxuu leeyahay qiimayaal tartan ah oo hadda bixiya tigidhada u dhigma ama xitaa qiimo jaban haddii horay loogu sii ballansaday internetka, oo leh fasal joogto ah. Iyo guntooda Firefly wuxuu leeyahay shabakad anfacaya oo ka baxaysa banaanka Penang hore, sidoo kale wuxuu bilaabay inuu ka howlgalo garoonka diyaaradaha ee Subang (Sultan Abdul Aziz Shah).
Berjaya Hawada sidoo kale wuxuu ka duulaa Dash-7 turboprops yar Kuala Lumpur iyo Singapore garoomo diyaaradeed oo ku yaal jasiiradaha dalxiiska ee Pangkor, Redang iyo Tioman. Qiimayaashu waa kuwo kacsan (laga bilaabo RM214 oo lagu daray khidmadaha hal dhinac), laakiin tani waa tan ugu dhaqsaha badan uguna raaxada badan ee lagu gaaro mid ka mid ah kuwan.
Gudaha Sabah iyo Sarawak, MASWING, wuxuu ka shaqeeyaa adeegyada turboprop oo isku xiraya bulshada gudaha, oo ay ku jiraan kuwa ku jira Kelabit Highlands, iyo magaalooyin xeebeed. MASWings waxay kala wareegtay shabakadda adeegga hawada miyiga shirkadda FlyAsian Express 1dii Oktoobar 2007, taasoo iyaduna adeegga kala wareegtay Malaysia Airlines 14 bilood ka hor.
Gudaha gaariga rakaabka ee Tareenka Gobolka Sabah
Tareennada masaafada fog ku teedsan ee Malaysia dhif ayay u dhigmi karaan gaadiidka waddooyinka marka la eego xawaaraha, laakiin hawlwadeenka gobolka Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB) waxay bixisaa adeegyo jaban oo guud ahaan la isku halleyn karo oo ku baahsan Malaysia (laakiin maaha Sabah / Sarawak ee Borneo). Qadka ugu weyn ee galbeedka wuxuu isku xiraa Butterworth, Ipoh, Kuala Lumpur iyo Johor Bahru, halka khadka bari uu maro Gua Musang iyo Taman Negara ilaa Kota Bharu, oo u dhaw xadka Thai iyo Jasiiradaha Perhentian.
Kibirka maraakiibta KTMB waa ETS (Adeegga Tareenka Korontada) laga bilaabo Butterworth illaa Gemas, oo maalin walba soconaya tareenno qaboojiye casri ah leh oo gaaraya 140 km / saacaddii. In kasta oo shabakadda inteeda kale, inta badan waa hal waddo oo keliya, oo leh astaamo naafto ah oo gaabis ah iyo dhammaan burburka iyo dib-u-dhaca soo noqnoqda. Bishii Maajo, 2016 KTMB waxay joojisay dhammaan tareennada hurdada ee khadka galbeed, ka dib koronto gelinta wadada Gemas. Waa fasal 2-qaboojiye oo keliya ah, tareenka naaftada ee naaftada ah ayaa hadda isku xira qaybta Gemas ilaa JB Sentral. KTMB waxay rajeyneysaa inay adeeg buuxa oo ETS ah ka hesho khadka galbeed sanadka 2020.
The Tareenka hawdka waa sharraxaadda saxda ah ee khadka bari ee u dhexeeya Kota Bharu (oo u dhow xadka Thai) iyo Gemas, oo ay ku jiraan joogsiyada Gua Musang, Kuala Lipis, Jerantut (Taman Negara) iyo Wakaf Bahru (Kota Bharu iyo Perhentian Islands). Tareenka asalka ah "Jungle Train" waa adeegga gaabiska ah ee maalintii oo istaaga saldhig kasta (15-20 daqiiqo kasta ama wixii la mid ah). Waa fasalka 3aad oo kaliya, macnaha hawo-ma-qabasho iyo boos celin la'aan, iyo joogsiyada qaar ayaa dherer noqon kara maaddaama ay tahay hal khad oo tareennada kale oo dhami ay leeyihiin mudnaanta - sidaa awgeed "Tareenka Jungle" wuxuu ku sugayaa wareegyada dhinaca jidka si soo socda ama u dhaafto tareenadu way mari karaan. Qaarkood waxay u arkaan inay tahay soo jiidasho iyo muuqaal qurux badan; dadka kale waxay dareemayaan inaysan jirin wax badan oo ay arkaan marka aad ku jirto hawdka. Khadadka bariga ayaa sidoo kale leh hal tareen oo hal habeen oo xawli ah (taas oo boos celisyo ay suurtagal tahay laguna taliyay) oo u socota jiho walba Ka sokow kuraasta-hawo-mareenka, tareenadani waxay leeyihiin Habeen Sare (ADNS) gawaarida hurdada, oo leh dabaqyo hoose iyo hoose dhinac kasta, sagxad kasta oo leh qayb adag oo ku taal daraf kasta iyo daah daah ah oo ku saabsan asturnaanta. Gawaaridu gilgilid iyo xoqitaan xoogaa laakiin waa kuwo raaxo leh oo nadiif ah.
Tigidhada ayaa la ballansan karaa oo xitaa lagu daabici karaa onlayn goobta KTMB. Weydiimaha iyo boos celinta waxaa lagu sameyn karaa taleefan Xarumaha wicitaanka KTMB, ☎ +60 3 2267-1200 (Malaysia) ama, ☎ +65 6222-5165 (Singapore).
Bariga Maleysia, khadka kaliya ee tareenka waxaa maamula Jabatan Kereta Api Negeri Sabah (JKNS) (Websaydh ku yaal Malay oo keliya), oo ka socda Tanjung Aru oo u dhow Kota Kinabalu kuna sii jeedda magaalada Tenom.
Malaysia waxay leedahay shabakad weyn oo weyn, oo ku dhammaata Waqooyiga-Koonfurta Expressway ee ku teedsan Xeebta Galbeed Singapore illaa xadka Thailand. Gaaska ama deegaanka loo yaqaan Petrol ayaa waxyar ka jaban qiimaha suuqa ee RM1.90 / litir (Ron 95) (Peninsular Malaysia, Sabah and Sarawak). Kharashka waxaa lagu bixiyaa xawaareyaasha waaweyn, laakiin kuwan waxaa lagu qiimeeyaa heerar kala duwan, oo ka bilaabma qaali ilaa macquul: wadidda dhererka waddanka (734 km) laga bilaabo xadka Thai illaa iyo Singapore Kharashka RM108 (~ US $ 25). Intaad gaari ka wadi karto Singapore ilaa Thailand maalin gudaheeda Xeebta Galbeed, nidaamka weyn ayaa si aad ah uga horumarsan Xeebta Bariga, oo aan lahayn wadooyin waaweyn, iyo xitaa ka yar Sabah iyo Sarawak, markaa hubi inaad sabab u yeelatid waqtiga safarka dheeriga ah haddii aad u safreyso meelahaas. Qiimaha qiimaha jidadka waaweyn iyo jidadka waaweyn ee magaalooyinka waawayn, gaar ahaan Kuala Lumpur, waa qiimo jaban oo udhaxeeya RM4.00 ilaa RM7.00 bixitaan kasta.
In kasta oo tayada wadista iyo caadooyinka Malaysia ay ka fiican yihiin inta badan inta kale ee Koonfur-bari Aasiya, qasab maahan inay weyn yihiin, gaar ahaan marka la barbardhigo waxa soo booqdayaasha ka imanaya inta badan waddamada Galbeedku ay ku barteen guriga. Gadiidka Malaysia wuxuu ku socdaa dhanka bidix, waana dhaxal uu ka tagay Ingiriiska. Ka taxaddar wadayaasha darawallada darawalnimada ah, gaar ahaan habeenkii, iyo gaar ahaan haddii aad tahay qof lugeynaya: dadka deegaanku caadi ahaan ma iloobaan nalka cas ee leexashada bidix, taas oo khatar gelinaysa dadka lugaynaya. Darawal ahaan, nalalka taraafikada, wadayaasha mootada ayaa ku urursan doona hortaada - u oggolow iyaga inay marka hore kaxeeyaan si looga fogaado shilalka.
Daryeelka ayaa loo baahan yahay marka baabuur lagu wado magaalooyinka waaweyn, sida Kuala Lumpur iyo George Town. Dhibaatooyinka waxaa ka mid ah wadayaasha mootooyinka is dilaya, dariiqyada gawaarida oo ciriiri ah maalintii oo dhan, iyo jahwareerka waddooyinka gaar ahaan qeybaha waawayn ee magaalada halkaas oo qorshayntu aysan ka jirin gumeysigii Ingiriiska ee markaas qabsaday. Magaalada ka baxsan, si kastaba ha noqotee, gawaarida iyo mootooyinka ayaa ah kuwa ugu fiican mararka qaarna waa habka kaliya ee lagu sahamin karo dalka. Qaar ka mid ah meelaha baadiyaha ah waxay leeyihiin mootooyin iyo mootooyin ay kireystaan ​​wax yar sida RM25 / maalin, waa hab fiican oo lagu sahminayo aagga maxalliga ah ama jasiirado waawayn sida Langkawi. Sida lafilayo, wakaaladaha kirada badankood waxay ubaahan doonaan ruqsad darawalnimo oo ansax ah in lasoo bandhigo marka la kiraysto. Heerarka shidaalka badanaa waa la isbarbar dhigaa ka hor iyo ka dib kirada, iyo sidoo kale waxyeellada, markaa hubi in wax walba la diiwaangeliyo, oo codso in laguu soo celiyo wixii shidaal ah ee xad-dhaaf ah haddii ay suurtagal tahay. Shirkadaha waaweyn ee kirada baabuurta sida Hertz iyo Avis ayaa sidoo kale laga yaabaa inay kaa codsadaan inaad haysato kaarka amaahda oo shaqeynaya halkaas oo deebaaji la oggolaan doono laakiin aan laga goyn doonin (haddii uusan jirin waxyeello gaadhiga ah).
Tagaasida ayaa laga heli karaa dhammaan magaalooyinka iyo magaalooyinka waaweyn, in kasta oo meelaha yar yar laga yaabo inaad wacdo mid (weydii dukaanle kasta ama la tasho bogagga jaallaha ah). Guud ahaan waxaad ubaahan doontaa inaad horey ugala xaajooto qiimaha, inkasta oo tagaasida tigidhada qaansheegta ah inta badan laga helo garoomada diyaaradaha. RM5 waa inuu kufiicanyahay safarka magaalada gaaban, halka RM100 ay kugu filantahay inaad taksi u kireysto maalin dhan.
In Kuala Lumpur, Tagaasida miisaaniyadu badanaa waa midab Casaan iyo Cadaan (Taksi Magaalada) - tagaasidaas looma ogola inay ka baxaan magaalada tusaale ahaan gobol kale) ama Jaale. Tagaasida badanaa waa saloon yar sida Proton Wira waxayna ku shaqeeyaan NGV (Gaaska dabiiciga). Tagaasida buluugga ah waa saloonno waaweyn ama MPVs (Baabuur Badan Ujeeddo Badan) iyo raaxo badan. Qiimahan ayaa sida caadiga ah 25-30% ka badan tagaasida miisaaniyada waxaana caadi ahaan laga heli karaa tagaasida oo dhan Kuala Lumpur oo ay ku jiraan suuqyada waaweyn & hudheelada. Tagaasida Cas & Caddaan ayaa laga soo dhaweyn karaa wadooyinka waana la cabiray. Hubso in taksiilaha uu yahay Malaysiyaan (darawalada oo dhan waa inay haystaan ​​ogolaansho tagsi & shati sawirkooda ku leh) intaadan fuulin, maadaama milkiileyaasha taksi ee aan damiirka lahayn lagu yaqaan inay taksigooda ka kireystaan ​​taakulayn aan sharciyeysnayn. Sida dalal kale badankood, shisheeyaha fiisaha shaqada loo ogol yahay oo keliya inuu ka shaqeeyo shaqada / warshadaha ku qeexan fiisada. Taksiileyda oo dhami waa inay noqdaan Maleysiyaan ama haystaan ​​PR maaddaama dawladda Malaysia aysan siin fiisaha shaqada ajaanibta inay kaxeeyaan taksiyada.
Intaa waxaa sii dheer, iska jir taxsiyada aan shatiga lahayn (taksi sapu) garoomada diyaaradaha. Waxay macno ahaan kuu qaadan karaan raacitaan. Waxaa jiri doona touts garoonka diyaaradaha oo dadka safarka ah u fidiya adeegyadooda taksi, xitaa iyagoo iska dhigaya inay sharci yihiin. Iyada oo aan la aamini karin sida ay u muuqan karto, qaar ayaa lagu yaqaanay inay dhacaan markii ugu horreysay booqdayaasha boqolaal ringgit hal safar oo magaalada ah, iyagoo ka qaadaya 100 jeer wax ka badan qiimaha saxda ah. Madaarada had iyo jeer Taksigaaga ka soo qaado waabableyda la oggol yahay ee ka hawlgala garoonka diyaaradaha laftiisa & marna qof kasta oo toos uga codsada. Waxay had iyo jeer sheegan doonaan inay sharci yihiin laakiin si dhif ah ayaa loo shatiyeeyay waxayna noqon karaan kuwo aan amaan ahayn. Waababka taksi ayaa ku siin kara rasiidhada. Tilmaamo kale ayaa ah inaad sii ballansato tagaasidaada horay. Dhamaan hudheelada wanaagsan ee hoteelada ayaa kaa caawin doona tan. Haddii aad ku dhex safreyso taksi aan sharciyeysnayn waxaa laga yaabaa inaadan ku daboolin caymiskaaga socdaalka haddii taksigaas uu ku lug yeesho burburka.
Abka ugu caansan ee lagu farxo ayaa ah Qaado iyo Uber. Grab, waxaad ku bixin kartaa lacag caddaan ah - darawallada ayaa leh isbeddel.
Habka ugu jaban ee loogu safro Malaysia waa bas. Dhammaan magaalooyinka cabir kasta ha lahaadee waxay leeyihiin boosteejo bas oo bixisa isku xirnaanta qaybaha kale ee dalka. Waxaa jira shirkado badan oo heerar kaladuwan oo lagu kalsoonaan karo leh, laakiin laba ka mid ah kuwa ugu waaweyn uguna kalsoonida badan ayaa jira Marmar iyo NICE / Plusliner. Basaska "raaxada" leh oo 24-kursi ah ayaa lagula talinayaa safarka masaafada dheer.
Haddii aad u safreyso fasaxyo ama xitaa dhammaadka usbuuca, waxaa lagugula talinayaa inaad boosaska sii sii qabsato kahor. Shirkado badan oo basaska ah ayaa kuu oggolaanaya inaad si toos ah uga ballansato khadka tooska ah websaydhkooda. Si kastaba ha noqotee, qaar ayaa kaliya u oggolaanaya ballansashada khadka tooska ah ee loogu talagalay shakhsiyaadka leh kaararka amaahda Malaysia, taas oo runtii aan ku habboonayn booqdayaasha caalamiga ah. Nasiib wanaag, wadayaasha basaska badankood waxay isku xireen labo bog oo jaale ah waxayna si gaar ah u anfacayaan haddii aad leedahay meelo cayiman oo aad tagto laakiin aadan hubin shirkadda basaska aad adeegsanayso. Labaduba waxay u oggol yihiin bixinta kaarka deynta oo waxay u baahan yihiin ujro magac u yaal ah adeeggooda (badanaa RM1-2)
Buug fudud (Buugga fudud),. (la cusbooneysiiyay Mar 2015)
Tigidhada khadka tooska ah ee baska,.
Qaboojiyaha basaska qaar ayaa noqon kara mid aad u qabow markaa ha iloobin inaad soo qaadato funaanad wanaagsan, surwaal iyo sharaabaadyo, gaar ahaan safarada habeenkii ee basaska qaaliga ah!
Luqadda rasmiga ah ee rasmiga ah ee Malaysia ay tahay Malay (si rasmi ah Bahasa Malaysia, mararka qaarkood sidoo kale loo yaqaan Bahasa Melayu). Luuqada Indooniisiya, oo looga hadlo xadka Indonesia, waxay la mid tahay Malay, dadka ku hadla labada luqadoodna guud ahaan way is fahmi karaan. Qeybo ka mid ah Malaysia oo ku dhow soohdinta Thai, gaar ahaan Kelantan, waxay leeyihiin lahjadaha Malay taas oo ku dhowaad aan la fahmi karin dadka ku hadla heerka Malay, in kasta oo dadka ku nool aagaggaas badankood ay awoodi doonaan inay kula hadlaan afka Malaayiga haddii loo baahdo.
English waa ku qasab dhammaan iskuulada oo si ballaadhan ayaa looga hadlaa magaalooyinka waawayn, oo ka mid ah kuwa sare ee aqoonta sare leh, iyo sidoo kale hareeraha meelaha dalxiis ee ugu waawayn, in kasta oo meelaha miyiga ah in yar oo Malay ah ay ku anfacayaan. Waxaa sidoo kale jira qaab iskudhaf ah oo Ingiriis ah oo looga hadlo dadka reer Maleesiya ee ku nool magaalooyinka, oo aan si aan habooneyn loogu yaqaanno Manglish, kaas oo ku lug leh beddelka koodhka u dhexeeya Ingiriisiga, Malayga iyo / ama luqado kale, oo xoogaa la qabsado haddii aad doonayso inaad ku biirto wadahadalka mowduucyada maxalliga ah. Ku dhowaad dhammaan dadka reer Malaysia uguma dhawaaqi doonaan xarafka, "h" tusaale ahaan "Saddex" iyo "Geed" waxaa loogu hadlaa "geed". Malaysiyaanku waxay had iyo jeer isku dayi doonaan inay ku hadlaan 'Ingiriisiga caadiga ah' (Ingiriiska) markay u soo dhowaadaan socdaalayaasha reer galbeedka. Guud ahaan, saldhigyada booliiska iyo xafiisyada dowladda waxaa ku shaqeyn doona shaqaale ku hadla Afka Ingiriiska.
Carabiga waxaa la baraa kuwa dhigta iskuullada diinta Islaamka, culimo badan iyo sidoo kale muslimiin kale oo fiiro gaar ah leh waxay lahaan doonaan amar ku shaqeeya Carabiga. Si kastaba ha noqotee, si ballaaran looma hadlo, in kasta oo luuqadda Malayga ay leedahay ereyo badan oo amaah ah oo ka yimid Carabiga. Waxaad sidoo kale ogaan kartaa tusaalooyinka Malayga ee lagu qoray xarfaha Carabiga. Tan waxaa loo yaqaan Jawi, walina waxaa loo adeegsadaa daabacaadda diimeed iyo qoraallada, gaar ahaan gobollada sida Kelantan, in kasta oo alifbeetiga Latin aad looga isticmaalo waddanka oo dhan.
Bulshada Shiinaha ee ku nool Malaysia waxay ku hadlaan lahjadaha kala duwan ee Shiinaha oo ay ku jiraan Cantonese, Mandarin, Buugga weedha Teochew, Buugga weedha Hakka, Buugga weedhaha Hainanese, Hokchew iyo Hokkien. Mandarin waxaa lagu dhigaa inta badan iskuulada Shiinaha halka Cantonese si caadi ah looga maqlo warbaahinta guud sababtoo ah caansanaanta taxanaha TVB ee ka socda Hong Kong ee bulshada Shiinaha dhexdeeda, sidaa darteed qaar badan ayaa labadaba ku hadla, marka lagu daro lahjadooda hooyo. Luuqada Hindida ee inta badan lagu hadlo waa Tamil; kuwa kale waxaa ka mid ah Malayalam, Punjabi iyo Telugu.
Gobollada woqooyi ee Jasiiradda Peninsular Malaysia ee xadka la leh Thailand, waxaa jira bulshooyin kala duwan oo Thai ah, oo gudaha looga yaqaan Orang Siam, oo ku hadla lahjadaha kala duwan ee Thai. Malacca oo ku taal koonfurta sidoo kale waxay hoy u tahay bulsho Burtuqiis ah oo ku hadasha creole ku saleysan Bortuqiis. Meelaha keynta fog ee Jasiiradda Peninsular ee Malaysia waxay sidoo kale hoy u yihiin dad qabiilooyin kala duwan ah oo loo yaqaan Orang Asli, oo ku hadla luqado kala duwan oo wadaniga ah sida Semelai, Temuan iyo kuwa kale oo badan. Bariga Malaysia dhowr luqadood oo asal ah ayaa sidoo kale looga hadlaa, gaar ahaan Iban iyo Kadazan.
Filimada iyo barnaamijyada telefishanka ayaa badanaa lagu muujiyaa luqadooda asalka ah iyada oo lagu turjumayo Malay subtitles. Qaar ka mid ah barnaamijyada carruurta waxaa loogu magac daray Malaay.
Beeraha shaaha ee kuyaala buuraha Cameron
Malaysia waa dal soo jiidasho leh oo wajiyo badan leh. Waa qowmiyado iyo dhaqammo badan, soo jiidashadeeduna way ku kala duwan yihiin astaamaha caanka ah ee Petronas Towers ee mashquulka badan Kuala Lumpur si loo helo xeebo ciid ah oo bacaad leh leh geedo timireed iyo hawd cufan leh orangutangs iyo shabeello.
Waxaa jira waxyaabo kala duwan oo cajiib ah beeraha qaranka. Safarradu waxay u dhexeeyaan kuwa ay adag tahay inaad ka seexato hudheelka illaa kuwa aad si buuxda ugu dhex nasatid hawdka toddobaadyo, adoo leh hagaha iyo naftaada oo keliya. Si aad u aragto shabeel ama maroodiga duurjoogta ah ee ku nool deegaankiisa dabiiciga ah waxaa laga yaabaa inaad ku qaadato in ka badan dhowr maalmood duurka, laakiin dhib kuma lahaan doontid inaad aragto xayawaanno yaryar. Beerta Qaranka ee Bako waa xadiiqadda qaran ee ugu da'da weyn Malaysia waana mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee lagu arko daanyeerada proboscis. Kaymaha waaweyn ee Taman Negara waxay noqdeen meel caan ku ah indha indheeyaasha, sida meelaha fog laakiin qurux badan Xadiiqadda Qaranka ee Gunung Mulu, Goobta Dhaxalka Dunida ee caanka ku ah sameynta karst limestone, dhagxaanta dhagxaanta iyo godad waaweyn. Si aad uga baxsato meelaha kulaylaha ah ee mugdiga badan, samee sida Ingiriisiga u sameeyay oo madaxa ugu aadi beeraha shaaha qabow ee Buuraha dhaadheer ee Cameron, tuulada loo yaqaan 'Tudor-style' ee jilicsan Buurta Fraser ama fuulid Buurta Kinabalu gudaha Sabah.
Dad badan, Malaysia waxay u keentaa sawirro xeebo hufan oo leh fursado quusitaan oo waaweyn maskaxda lagu hayo - iyo sabab wanaagsan. Sipadan xeebta Sabah, iyo quruxda badan Jasiiradaha Perhentian Jasiiradaha ayaa ka mid ah meelaha ugu fiican (uguna caansan). Xeebaha xeebta ee qaybaha warshadaha yar, guud ahaan, waxay mudan yihiin in lagu kaxeeyo quruxdooda dabiiciga ah iyo nasashada kampung (tuulooyinka). Raac dadka badan si aad u dirto kaarka saxda ah ee ciidda Langkawi Jasiiradaha, halkaas oo aad ku yeelan karto cocktail xeebta oo aad ku nagaato mid ka mid ah meelaha dalxiisyada badan.
Haddii aad inta badan xiiseyneyso inaad qaadato garaaca magaalo, ha moogaan Kuala Lumpur's sariir waalan oo casri ah oo casri ah, oo ay ku jiraan Petronas Twin Towers caan ah. George Town, magaalada caasimada ah Penang, ayaa caan ku ah cunnadiisa weyn, qaab dhismeedka gumeystaha, iyo bulshooyinka Shiinaha, Peranakan iyo Hindida oo muddo dheer taagnaa isla markaana dhisan, kuwaas oo magaalada la wadaaga qowmiyadaha Malay, Thais iyo Eurasia. Ipoh waa ikhtiyaar wanaagsan haddii aad ku raaxeysato magaalo xoogaa gaabis ah oo ku dheehan dhismayaal quruxsan oo xilliyadii gumeysiga laga soo billaabo 100 sano ka hor, iyo Malacca waxaa loogu talagalay kuwa doonaya inay raad raac ku sameeyaan taariikhda gumeysiga iyo boqortooyadii Malaysia dhowr boqol oo sano oo hore. Wixii khibrad gebi ahaanba ka duwan, madax ah Kota Bharu si loo ogaado dhaqan-dhaqameedka Islaamiga ah ee muxaafidka ah ee ay saamaynta ku yeelatay Thailand, dhawr mayl uun baa u jirta, ama booqo magaalooyinka kala duwan ee Malaysia, sida Kuching iyo Kota Kinabalu. Gaar ahaan markaad la safreyso carruurta, tixgeli inaad booqato mid ka mid ah xayawaannada waaweyn ee waddanka, sida Taiping Zoo, Kuala Lumpur'Zoo Negara' iyo Malacca's Zoo.
Xeeb ku taal jasiiradaha Perhentian
Malaysia waxay leedahay heer sare dharbaaxidda. Meelaha ugu caansan waa jasiiradaha ku teedsan Xeebta Bari ee jasiiradda Malaysia (Perhentian Islands, Redang, Tioman iyo kuwa kaloo badan), in kasta oo xilliga quusintu ku egtahay Abriil ilaa Sebtember. Si kastaba ha noqotee, barta quusin ee ugu caansan - badanaa lagu qiimeeyo kuwa ugu fiican adduunka - waa Sipadan, oo ka baxsan cirifka bari ee Malaysiya Borneo. Waxaa jira goobo kale oo badan oo aan si fiican loo aqoon, sida Layang Layang.
Raadinta Biyaha Cad
Waxaad kaheli kartaa Fasalka Koowaad si aad u adag oo khatar ah Fasaxyada V ee Fasalada V ee ku yaal jardiinooyinka qaran ee badan ee Malaysia:
Jeram Besu - Fasalka I-III - Pahang
Cameron Highlands - Fasalka V - Pahang
Wabiga Lipis - Pahang
Wabiga Anak Jelai - Fasalka I-II - Pahang
Kalluumeysiga Wabiga - Fasalka I-II - Pahang
Wabiga Sedim - Fasalka III-IV - Kedah
Sungai Selangor - Fasalka I-III - Selangor
Wabiga Kiulu - Fasalka II - Sabah
Wabiga Padas - Fasalka III-IV - Sabah
Sungai Itek (Webiga Kampar) - Fasalka I-III - Perak
Wabiga Sungkai - Fasalka I-II - Perak
Singoh River - Fasalka V - Perak
Wabiga Endau - Johor
Wabiga Nenggiri - Fasalka I-III Kelantan
Ciyaar silat ah oo dhaceysa.
Malaysia waxay hoy u tahay qaab Malay gaar ah oo fanka dagaalka ah oo loo yaqaan silat. Tartamada Silat waxaa lagu qabtaa iskuulo kala duwan oo dalka ku yaal, Ciyaaraha Koofur-bari Aasiyaana waa hordhaca koowaad ee caalamiga ah ee silat, iyadoo ay la tartamayaan dalalka deriska ah sidoo kale. Waxaa sidoo kale jira qaab isku mid ah oo qaab dhaqameed qaabeysan oo silat ah loo yaqaan silat gayung, taas oo aad ugu habboon in la arko haddii aad fursad u leedahay.
Intaas waxaa sii dheer, sidoo kale waxaa jira masters-ka kung fu badan oo ka tirsan qowmiyadda Shiinaha, iyo Malaysia ayaa si isdaba joog ah uga mid ah kuwa ugu sarreeya bandhigyada tartamada caalamiga ah ee wushu.
Malaysia waxay hoy u tahay nooc ka mid ah Malay gaar u ah heesaha oo loo yaqaan dikir barat. Dikir barat sida caadiga ah waxaa ku luuqeeya koox heesta ah, in kasta oo ay jiri karaan qaybo kali ah, sidoo kale waa lagu heesaa capella a, ama ay weheliso oo keliya qalab muusiko lagu garaaco. Tartanada baratka ah ee 'Dikir barat' waa kuwo caan ka ah bulshada Malay, waxaana had iyo jeer laga sii daayaa telefishanka qaranka Malaysia.
Lacagta Malaysia waa tan Malaysian-ka, oo loo soo gaabiyo sida RM (Koodhka ISO: MYR). Waxaa loo qaybiyaa 100 adiga (senti) Giraanta ayaa mararka qaarkood si aan rasmi ahayn loogu tilmaamaa doollar oo waxaad ku arki kartaa calaamadda '$' qoraallada duugga ah. Waxaa jira qadaadiic ah RM0.05 (qalin), RM0.10 (qalin), RM0.20 (qalin ama dahab), iyo RM0.50 (qalin ama dahab) iyo sidoo kale biilasha RM1 (buluug), RM5 (cagaar) , RM10 (casaan), RM20 (oranji), RM50 (cagaar / buluug) iyo RM100 (guduud). 5 qadaadiicda sen waxaa badanaa lagu siiyaa isbadal xarumaha waaweyn ama dukaamada waaweyn halka kuwa wax iibiya iyo kuwa wax ku iibiya waddooyinka ay diidi karaan inay aqbalaan. Ku Singapore iyo lacagta Brunei ayaa sidoo kale loo yaqaan giraanta Malay, marka markaad u dhowdahay xuduudaha waxaad u baahan kartaa inaad hubiso si aad u hubiso lacagta ay soo xiganayaan qiimaha.
Lacagaha qalaad waa ma guud ahaan waa la aqbalay, in kastoo laga yaabo inaad ku baxdo isweydaarsiga qaar ka mid ah doolarka Mareykanka ama yuuro xitaa meelaha fogfog, laakiin waxaad filaysaa waxyaabo badan oo indha sarcaad ah iyo xoogaa qancin ah. Waxa ugu weyn ee laga reebay ayaa ah Singapore doolarka, oo ay aqbalaan KTMB iyo waddooyinka lacagta laga qaado, laakiin sicir-barar aad u xun oo 1: 1 ah (cilad-xumo soo noqnoqota markii ringgit-ka lagu beddelay kan Singapore dollar, ka hor 1970-yadii).
Bedelka Lacagta xisaabiyeyaasha ayaa si fudud looga heli karaa meelaha waaweyn ee wax laga iibsado waxayna leeyihiin sarrif ka wanaagsan kan bangiyada iyo garoomada diyaaradaha. Hubso inaad sheegto qadarka aad rabto inaad bedesho oo aad weydiisato 'sicirka ugu fiican' maadaama sicirka lagu muujiyey sabuuradda badiyaa laga gorgortami karo, gaar ahaan qaddar badan. Waraaqaha waaweyn ee ajaanibta ah, sida € 500, waa wax aan macquul ahayn in lagu beddelo sicir wanaagsan meelaha qaarkood, gaar ahaan Sabah ama Sarawak, halkaas oo ay bangiyadu ku siinayaan qiimo aad u hooseeya oo u dhigma kan aad heli doontid haddii aad beddesho warqadda lacagta yar qadarka. Qaar ka mid ah sarriflayaasha lacagaha ee Kota Kinabalu ama Kuching xitaa way diidi karaan meheraddaada haddii aad haysatid waraaqo waaweyn oo ajnabi ah, sidaa darteed ikhtiyaarka ugu fiican ayaa ah inaad la timaaddo qoraallo yaryar haddii aadan diyaar u ahayn inaad wax ka iibsato.
ATM-yada si ballaaran ayaa looga heli karaa magaalooyinka, laakiin ku kaydso lacag caddaan ah haddii aad u baxdo jasiiradaha yaryar ama hawdka. Kaararka amaahda waxaa loo isticmaali karaa dukaamada, maqaayadaha iyo hudheelada badankood, in kastoo fiiqan waxay dhibaato ku noqon kartaa goobaha wax lagu gado. Isticmaalka kaarka deynta, hubso in kaarkaaga deynta / kaarka debitku uu ku saleysan yahay jab maadaama ganacsatada badankood aysan aqbalin strips magnetic kaararka ku saleysan.
Bangiyada ku yaal Malaysia waxay qabtaan macaamil ganacsiyada caalamiga ah. Kuwani waxay u dhexeeyaan khidmad magac u yaal ah haddii aad koonto heysato illaa qaddar qaali ah haddii aad u socoto kaliya adeegsiga adeeg. Bangiyada caalamiga ah sida Citibank & HSBC waxay joogaan Malaysia, iyadoo kuwa dambe ay laamo ku leeyihiin dalka oo dhan. Baananka maxalliga ah waa Maybank, Bangiga Dadweynaha & Bangiga CIMB, waxayna beddel aad u wanaagsan u yihiin bangiyada aan hore u soo sheegnay, gaar ahaan xagga qiimaha, aqoonta maxalliga ah & joogitaanka iyo sidoo kale adeegyada caalamiga ah ee la heli karo tusaale xawaaladaha. Wixii weydiimo ah iyo macaamil ganacsi ah, hel lambar, fadhiiso oo sug in markagaaga loo adeego. (Looma baahna in saf la galo intaad ku sugayso raaxada hawo qaboojiyaha ah!)
Bangiyadu waxay furan yihiin Isniinta-Jimcaha saacadaha 09: 30-16: 00 bangiyada la xushay waxay furan yihiin Sabtida 09: 30-11: 30 marka laga reebo sabtida koowaad iyo saddexaad ee bil kasta. Gobollada Kedah, Kelantan iyo Terengganu, waxay furan yihiin Axadda-Khamiista saacadaha 09: 30-16: 00.
Khatarta khiyaanada darteed, ATM-yada Malaysia badankood ayaan kuu oggolaanayn inaad ka noqoto adoo isticmaalaya kaararka debitka shisheeye. Haddii kaarkaaga la diido, isku day ATM kale. Kani waa mid u gaar ah Malaysia mana quseeyo Thailand, Singapore, ama Indooniisiya. Haddii aad wacdo bangigaaga ama xitaa Visa / MasterCard, inta badan kama warqabaan maxaa yeelay macaamilka waxaa diiday bangiga Malaysia. Hubso inaad la timid lacag ama qaabab kale oo lacag ah haddii kaarkaaga deynta la diido.
Inta badan booqdayaasha reer Galbeedku waxay heli doonaan Malaysia wax aad u jaban, in kasta oo ay si muuqata uga qaalisan tahay dalka ay deriska yihiin ee Indonesia. Waad ku noolaan kartaa qolalka hudheellada oo waxaad ku cuni kartaa cuntada hawker wax ka yar RM50 maalintii, laakiin waxaad jeclaan doontaa inaad labalaabto tan raaxada, gaar ahaan haddii aad u safreyso Bariga Malaysia oo aad qaali u ah. Kuala Lumpur sidoo kale guud ahaan wuu ka qaalisan yahay dalka intiisa kale. Geesta kale, hudheelada raaxada iyo qiimayaasha duulimaadka ayaa isbarbar dhig la awoodi karaa, iyadoo xitaa hudheelada ugu caansan ee 5-xidig ka qaalisan wax ka yar RM400 / habeenkii.
Bukit Bintang, aag ganacsi oo caan ah Kuala Lumpur
Talooyinku maahan wax caado ka ah Malaysia. Si kastaba ha noqotee, caarada yar ayaa sida caadiga ah la qadarinayaa haddii lagu siiyay adeeg tusaale ah. Kharashka adeegga ee 10% wuxuu ku jiraa biilka guud inta badan maqaayadaha qaboojiyaha leh. Makhaayadaha ugu qaalisan, baararka iyo hudheelada ayaa laga yaabaa inay muujiyaan qiimaha qaab RM19 ++ (“lagu daray”), oo macnaheedu yahay in cashuurta iibka (6%) iyo khidmadda adeegga (10%) lagu dari doono biilka. Canshuurta hoteelka ee 5% sidoo kale waa lagu dari karaa tan.
Kuala Lumpur waa mecca laga dukaameysto dharka, korantada, saacadaha iyo alaabada kumbuyuutarka, oo leh qiime aad u tartan badan heer kasta. Noocyada maxalliga ah ee Malaysia waxaa ka mid ah Royal Selangor iyo British India. Dharka dhaqameed ee Malaysiya (batik) waa xusuus caan ah. Meesha ugu raqiisan ee si fudud looga iibsado xusuusta qowmiyadeed (gaar ahaan qoryaha) waxay ku taal Kuching, Bariga Malaysia, meesha ugu qaalisanna waa tan weyn, posh Kuala Lumpur Xarumaha wax iibsiga.
Dukaammada guud guud ahaan waxay ka furan yihiin 10: 30-21: 30/22: 00 magaalooyinka waaweyn. Waxay ka furaan oo u xirmaan ganacsi goor hore magaalooyinka yar yar iyo baadiyaha. Dukaamada qaar ayaa sidoo kale laga yaabaa in la xiro maalmaha qaarkood, sida Malacca oo dukaamo iyo maqaaxiyo badan ay xirmaan Talaadada.
Haddii aad wax badan iibsato inta aad wax ka iibsaneyso Malaysia (taas oo aad u fudud in la sameeyo), sicirka boostada dusha sare ayaa aad macquul u ah. Shandadaha dheeraadka ah ee garoonka diyaaradaha wali way sarreeyaan laakiin kama badna sida dalal kale oo badan. Ka hubso marka hore shirkaddaada diyaaradaha.
Isgoysyada Malay, cunnada Shiinaha iyo Koonfurta Aasiya, Malaysia waa meel aad u fiican cun (ku cun Malay) U fiirso takhasusyada gobolka iyo cunnooyinka Nyonya (Peranakan), isku dhafka u dhexeeya Malay iyo karinta Shiinaha. Xitaa waxaa jira cunto karis u gaar ah Eurasia oo laga helo Degsiimadii Burtuqiiska ee Malacca, oo ah xuddunta bulshada Eurasia ee ku abtirsata Bortuqiiska.
Maleysiyaanka ayaa aad ugu faana cunto karinta magaalooyin badankood ama xitaa tuulooyinka waxay leeyihiin takhasusyo macaan oo u gaar ah sida Penang char kway teow, Kajang satay, Ipoh bean sprout chicken, Sarawak laksa, Kelantanese nasi dagang, Sabahan xinava, iyo qaar badan oo badan. Intooda badani waxay ku tiirsan yihiin hadal afka ah xayeysiin waxayna had iyo jeer ku yaalliin meelaha ugu dhib yar, meelaha bannaanka u ah sidaa darteed waxaad u baahan tahay inaad isku daydo inaad weydiiso dadka maxalliga ah talooyinkooda shaqsiyeed.
Haddii aad damacsan tahay inaad ku dhex wareegto Malaysia adigoo tijaabinaya cuntada maxalliga ah, yaysan ku kadsoomin magacyada. Mararka qaarkood laba saxan oo gebi ahaanba ka duwan qaybaha kala duwan ee dalka ayaa lagu garan karaa isku magac. Tusaale ahaan, laksa waxaa loola jeedaa suxuunta baastada gabi ahaanba ka duwan Penang iyo Sarawak.
Guud ahaan, wax badan ayaad ka cuni kartaa meel kasta oo Malaysia ah. Goobaha cuntada waa isbarbardhig nadiif ah - waxa kaliya ee ay tahay inaad iska ilaaliso markaad ku soo noqnoqoto dariiqa ama dukaamada hawdka waa baraf cabitaanadaada, maadaama barafka halkaas lagu isticmaalay laga yaabo inaysan ku xirnayn heerarkaaga nadaafadeed. Makhaayadaha dhabta ah tani dhib ma leh. Sidoo kale waxaa laga yaabaa inaad iska ilaaliso inaad ka dalbatid biyaha dukaamada hawker ama mamak makhaayadaha maadaama sida caadiga ah laguu adeegi doono biyaha tuubada aan la karin.
Meelaha ka jaban badanaa ma muujiyaan qiimaha; badankood waxay ka qaadi doonaan dalxiisayaasha si daacad ah, laakiin hubi sicirka ka hor inta aan la dalban si loo hubiyo.
Caadooyinka cunidda ayaa socodsiiya ciyaarta, laakiin cuntooyinka badankood waxaa cuna fargeeto iyo qaaddo: riix oo ku jar fargeeto gacanta bidix, kuna cuni qaadada midigta.
Maaddaama cuniddu tahay 'madadaalo' ay jecel yihiin dadka reer Maleesiya, badankooduna waxay ku xeel-dheer yihiin isticmaalka qoob-ka-cunista, iyadoon loo eegin asalka. Baasto iyo suxuunta Shiinaha ayaa sida caadiga ah la yimaada kuwan, halka Malayga iyo cuntada Hindida ah lagu cuni karo gacanta, laakiin cidna isha kama jabi doonto haddii aad dalbato fargeeto iyo qaaddo halkii.
Haddii aad wax ku cunayso gacanta, marwalba isticmaal gacantaada midig si aad cuntadaada afka u galisid, maadaama ay Malayshiyada iyo Hindidu dhaqan ahaan u adeegsadaan gacanta bidix waxyaabaha wasakhda ah sida maydhashada ka dib markay isticmaalayaan musqusha Markaad wax ku cunayso cunnada lagu cuno maqaayadaha Shiinaha, fiiro u yeelo aadaabta caadiga ah iyo tan ugu muhiimsan, ma samayn dhalooyinkaaga si toosan ugu dheji baaquli bariis ah. Tani waxay u egtahay fooxa fooxa ee ku gubanaya macbudka waxayna leedahay fikradaha dhimashada dhimashada dadka kugu xeeran. Haddii aad wax ku dhex cuneyso koox, u adeegida suxuunta had iyo jeer waa la wadaagayaa, laakiin waxaad heli doontaa baaquli kuu gaar ah oo bariis iyo maraq ah.
Macluumaadka ku saabsan cuntooyinka shaqsiyadeed ee Malaysia, fadlan eeg Cuntada Malaysiya maqaal
Xagee wax laga cunaa
Gudaha kadiga kopi meel u dhow xarunta tareenka ee Beaufort, Sabah
Meelaha ugu jaban ee wax laga cuno waa dukaamo hawker iyo dukaanka kafeega, Oo loo yaqaan kedai kopi Malay ama kopitiam gudaha Hokkien. Dukaamadan ayaa iibiya, ka sokow kafee, noocyo kale oo badan oo cunto iyo cabitaanno ah. Gaar ahaan caan ah oo dhadhan fiican leh waa mamak meheradaha, oo ay maamusho muslimiinta Hindida una adeegta khidmadaha maxalliga ah sida roti canai. Inta badan dukaamada waratada ayaa sii furnaanaya illaa goor dambe qaarna xitaa waxay ku shaqeeyaan isbeddello sidaas darteed waxaad ka heli kartaa isla meheraddaas oo ku bixinaysa cunno kala duwan meelo kala duwan maalintii oo dhan. Waxa kale oo aad ka qaadan kartaa wax kasta oo ka mid ah meheradda, kaliya weydii bungkus (Malaay) ama ta kale (Kantonese). Cunnada hawker-ka ayaa si dhif ah kaaga kici doonta RM5. Heerarka nadaafadda ee Malaysia, halka aysan gaarsiisneyn tan deriska ah Singapore ama waddamada Reer Galbeedka, weli waa macquul oo aad ayey ugafiican tahay in la dhaho, Shiinaha ama inta badan inta kale ee Koonfur-bari Aasiya. Kaliya fiiro gaar ah u yeelo, iyo guud ahaan hadlida, haddii xero ay ku ganacsadaan dadka deegaanka, waa inay amaan ahaataa in lagu cuno halkaas.
Hal talaabo oo kor loogu qaado cabirka ayaa ah kedai makanan ama qaabka reer galbeedka makhaayad. Nooca aad iska fiiriso waa nasi kandar makhaayad (sidoo kale loo yaqaan nasi campur or nasi padang), oo leh noocyo kala duwan oo curry ah iyo xoqitaanno si aad bariiskaaga dushiisa ugula hadasho.
Makhaayadaha cuntada laga cuno (makanan laut) waa kuwo isbarbardhigaya qiime ahaan laakiin weli qiimo aad u fiican heerarka ugu badan; hubi qiimaha intaadan dalban. Cows-ka maxalliga ahi waa kuwo waawayn, kalluunka uumiga ah ee qaabka shiineysku u yahay daaweyn iyo carsaanyo loo adeegsaday maraqa chilli ee dhegta ayaa si gaar ah caan u ah.
Ugu dambeyntii laakiin ugu yaraan, fursado yar oo dhiirrigelin ah. Maxkamadaha cuntada suuqyada wax lagu iibiyo ayaa ah hab wanaagsan oo lagu tijaabiyo macmacaanka maxalliga ah ee raaxada hawo-qaboojiyaha leh, iyadoo la siinayo kaliya qiimo yar qiimo jaban. Haa, sidoo kale waxaad ka heli kartaa McDonald's, KFC, Pizza Hut iyo tuhmanayaasha caadiga ah oo lagu daray kuwa ku dayda Malaysia oo dhan.
Ahaanshaha waddan Muslimiin u badan yihiin, helitaan xalaal ah cuntada Malaysia waa fududahay, laakiin dukaamada Shiinaha iyo makhaayadaha badankood waa ma xalaal ah. Weydii haddii shaki kaaga jiro. Cuntooyinka laga cunteeyo maqaayadaha Malay iyo maqaayadaha cuntada laga cuno ee reer galbeedka sida McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut waa xalaal. Makhaayadaha hudheelada waaweyn looma aqoonsan yahay 'Xalaal' maadaama ay sidoo kale u adeegaan aalkolo, laakiin marka laga reebo makhaayadaha Shiinaha, guud ahaan uma adeegaan hilibka doofaarka. Muslimiinta maxalliga ah waxay wax ka cunayaan makhaayadaha reer galbeedka, Shiinaha iyo Hindida haddii ay calaamado xalaal ah ku dhegan yihiin darbiyada. Makhaayadaha badankood waxay u muuqdaan inay ku muujinayaan shahaadadooda xalaasha ah ama calaamadaha xalaasha ah meelahooda. Shahaadada Xalaasha waxaa bixiya oo fuliya hay'ad dawladeed, badanaa JAKIM.
Waxaa jira maya kosher xarumo ku yaal Malaysia, sidaa darteed booqdayaasha Yuhuudda waa inay la yimaadaan cuntadooda. Dukaamada cuntada ee Kosher iyo maqaayadaha waxaa laga heli karaa deriska Singapore, Thailand, Filibiin iyo Fiyetnaam, markaa waxaad u baahan kartaa inaad ka joogsato mid ka mid ah waddamadaas si aad u xajisato ka hor intaadan gelin Malaysia.
Khudradda ay sifiican ufahansanyihiin bulshada Shiinaha iyo Hindida (maahan sidaas oo kale Malleeshiyada muslimiinta ah iyo kuwa kale ee asal ahaan laga tirada badan yahay) makhaayado badan ama dukaamada waratada ayaa awoodi doona inay la yimaadaan wax codsi ah (HA sheeg "maya hilib, kalluun, cunno cunno - Weydiiso khudaarta iyo / ama ukunta KELIYA ”), laakiin ha ku tiirsanaan gebi ahaanba sharraxaadda tusmada: suxuunta u eg kuwa aan waxba galabsan sida" khudradda shiilan "IWM inta badan waxaa ku jiri doona digaagga doofaarka ee makhaayadaha Shiinaha ee aan xalaasha ahayn,belacan, oo badanaa loo isticmaalo Malayga iyo suxuunta shiinaha ee basbaaska leh), maraqa kalluunka, iwm. Makhaayadaha Hindida badanaa waxay leeyihiin xulasho khudradeed oo aad u wanaagsan - roti (Rootiga fidsan ee Hindida - nooc kasta ha ahaadee; oo ay ku jiraan roti canai, roti naan, capati, tosai) waa xulashooyin wanaagsan, oo ku adkeyso in lagu siiyo dhal (diirinta ku saleysan lentil-ku-saleysan) si aan laguu siin qashin kaluunka lagu kariyo. Makhaayadaha Shiinaha ee khudradda ka daahirka ah (badanaa u adeega wax soo saar "hilib jeesjees ah" oo laga sameeyay tofu, gluten iwm) aad ayey u fududahay in laga helo magaalooyin waaweyn oo ay ku nool yihiin dad badan oo Shiine ah Helitaanka cuntada khudradda ah ee miyiga, gaar ahaan kuwa u dhow tuulooyinka kalluumeysiga ama gobollada ay ku badan yihiin Muslimiinta / Malay, way ka adkaan kartaa, laakiin barashada qaar ka mid ah eray bixinta aasaasiga ah ee Malay waxay wax weyn u tareysaa inay kaa caawiso inaad farriintaada gaarsiiso - eeg buugga weedhaha Malayga. Makhaayadaha 'Upmarket Western', sida kuwa u adeega cunnada Talyaaniga waxay caadi ahaan yeelan doonaan xulashooyin khudradeed oo wanaagsan.
veganism si dhif ah ayaa looga fahmay qaybtan adduunka waxaana si khaldan loogu khalday macnaha khudradda, haddana khamaarka ugu aaminka badan ee loo yaqaan 'vegan' waa in la ilaaliyo makhaayadaha khudradda ee Buddhist-ka Shiinaha (inta badan makhaayadaha khudradda ee Shiinuhu waa asal ahaan vegan waxayna ku shaqeeyaan mabaadi'da Buddhist ee aan dilka iyo naxariista, sidaas awgeedna way ka fogaanayaan isticmaalka waxyaabaha caanaha laga sameeyo, ukunta, iyo 5ta khudradood ee uurka ku jira ”[basasha, toonta, liqyada, iwm.] oo lagu niyad jabiyo Mahayana Buddhism). Hadana haddii aad weli dareemeyso xasillooni la'aan ama aadan hubin, haka waaban inaad weydiiso.
Maleysiyaanka ayaa jecel labada qaxwo (nuqul) iyo shaah (th), gaar ahaan cabitaanka qaranka teh tarik (“Shaah jiiday”), oo loogu magac daray mooshinka 'jiidaya' ee masraxa loo isticmaali jiray in lagu shubo. Sida caadiga ah, labadaba waxaa loo adeegi doonaa kuleyl, macaan iyo qadar caano iskujir ah; codsi taa o in laga boodo caanaha, waa yaab shaah caano qabow leh, ama waa sidaa shaah aan caano lahayn Cabitaanka aan sonkorta lahayn gabi ahaanba waxaa loo arkaa wax aan caadi aheyn, laakiin weydiisasho kurang manis (sonkor yar) xanuunka wuu fududaynayaa. Si kastaba ha noqotee, haddii aad runtii rabto sonkor la'aan, waxaad isku dayi kartaa inaad weydiisato "teh kosong."
Waxyaabaha kale ee deegaanka laga jecel yahay waa kopi tongkat ali ginseng, isku dar kafee ah, xidid maxal ah, iyo ginseng oo loo adeegsaday caano isku darsan oo loo baddelay viagra iyo dibi cas oo la isku daray waxaana badanaa lagu xayeysiiyaa sawir sariir jaban badh.
Ikhtiyaarrada kale ee aan khamriga ahayn waxaa ka mid ah cabitaanka shukulaatada Milo iyo casiirka lime (limau). Casiirrada khudradda ee dhawaan la sameeyay ayaa sidoo kale si ballaaran loo heli karaa, iyo sidoo kale cabbitaanno badan oo qasacadaysan (qaar baa yaqaan, qaar baa ka yar).
Waxa kale oo jira cabitaan maxalli ah oo ka kooban caano soya cad iyo jelly caws madow (cincau) loo yeedhay soya cincau. Waxaa laga dalban karaa inta badan Xarumaha waardiyaha iyo kafateeriyada hareeraha waddada (kedai kopi / kopitiam).
Xagee joogaa Malaysia
Huteelada iyo hoteelada ayaa laga rabaa inay lacag ka qaadaan a cashuurta dalxiiska on martida caalamiga ah: RM10 qolkiiba habeenkii, taas oo laga yaabo inaan lagu darin sicirrada la xayaysiiyay.
Hoteellada miisaaniyadda iyo hoteelada dhalinyarada waxaa laga heli karaa magaalooyinka badankood iyo hareeraha inta badan meelaha dalxiiska. Sida ugu badan ee waafajinta miisaaniyadda, qaar ayaa ka kalsooni badan kuwa kale. Ka taxaddar marka aad dooranaysid dejinta miisaaniyadda si aad uga fogaato meelaha ay ku yaallo falalka sharci-darrada ah ee sharci-darrada ah.
Magaalooyinka waaweyni waxay yeelan doonaan YMCAs kuwaas oo ah qamaar aamin ah. Silsilad miisaaniyadeed oo kale oo la ogaan karo waa Tune Hotels, oo gacansaar la leh shirkadda duulimaadka miisaaniyadda, Air Asia. Way sii ballaadhiyaan oo waxay leeyihiin hudheelo meelo badan oo dalka ku yaal ah
Huteelada dhexdhexaadka ah ayaa si fudud loo heli karaa meel kasta oo ay joogaan. Qiimaha hudheelada 3-4 xidig ayaa kor uga kacaya RM100 guud ahaanna waa kuwo lagu kalsoonaan karo xaga tayada.
Hoteellada 5-xidig leh, guryaha adeegga iyo meelaha loo dalxiis tago waxaa laga helaa magaalooyin waaweyn sida Kuala Lumpur, George Town, Johor Bahru, Kota Kinabalu iyo Kuching. Sidoo kale, ku dhowaad dhammaan jasiiradaha waxay leeyihiin goobo dalxiis oo heer sare ah iyo baaxado loogu talagalay socotada hodanka ah.
Jaamacadaha Malaysia guud ahaan waa kuwo sifiican loo tixgaliyo waxayna kaxeeyaan ardayda isdhaafsiga dhow iyo kuwa fog. Jaamacadaha Malaysia dhexdooda, midka ugu caansan uguna weyn waa Jaamacadda Malaya (UM), oo ku yaal Kuala Lumpur. Intaa waxaa dheer, dhowr jaamacadood oo ajnabi ah ayaa xarumo ka aasaasay Malaysia.
Helitaanka fiiso shaqo waxay qaadataa xoogaa dadaal ah. Habka ugu fudud ee looga shaqeyn karo Malaysia ayaa laga yaabaa inay u shaqeyso shirkad dibedda ah oo lagu dhajiyo Malaysia. Si aad u hesho ruqsad shaqo, waxaad u baahan tahay inaad dalab ka hesho loo-shaqeeyahaaga mustaqbalka oo isagu kuu samayn doona waraaqaha. Aad ayey qaali u tahay waxayna la socotaa xayiraad badan haddii shirkad ay dooneyso inay shaqaaleyso qof ajnabi ah iyo sida ku xigta oo aan macquul aheyn. Sida kor lagu sheegay, dariiq macquul ah waa in lagu wareejiyo. Helitaanka shaqo haddii kale uma badna inaad guursato qof maxalli ah oo xitaa markaa way adag tahay.
Maalmaha shaqada ee gobollada Kelantan, Terengganu, Kedah iyo Johor waa laga bilaabo Axadda illaa Khamiista, halka inta badan gobollada kale, maalmaha shaqadu yihiin Isniinta ilaa Jimcaha. Fasaxyada usbuuca waa Sabtida iyo Axadda, halka gobollada Kedah, Kelantan, Terengganu iyo Johor ay yihiin Jimcaha iyo Sabtida.
Heerka dambiyada ayaa aad uga badan kan deriska Singapore. Dembiyada ka dhanka ah dalxiisayaasha ayaa inta badan lagu xadiday boorsooyinka, jeebabka iyo xatooyada yar yar. Waa muhiim inaad il gaar ah ku heyso waxyaabaha qiimaha leh. Xatooyada ayaa aad ugu badan meelaha dadku ku badan yahay, sida suuqyada iyo gaadiidka dadweynaha. Guud ahaan, haddii aad ka fogaato aagagga cidlada ah, ku laabo hudheelkaaga ka hor saqda dhexe oo aad u adeegsato caqligaaga guud, uma badna in lagu soo weeraro. Khaniisnimada waa dambi iyo baararka khaniisiinta waxaa weerari kara booliska; dalxiisayaasha khaniisiinta iyo kuwa isu galmooda waa inay is ogyihiin oo taxaddaraan.
Halka dadka reer Singapore ay inta badan ka sheekeeyaan sheekooyinka "Duurjoogta Duurjoogta ah", SingaporeHeerka dambiyada ayaa si aad ah u hooseeya, iyo heerka dambiyada ka dhaca magaalada xadka ku taal ee Johor Bahru gaar ahaan heerarka Malaysia. Faallooyin kasta oo aad ka maqasho heerka dambiyada Maleesiya waa in lagu qaadaa macnahaas, iyo inta badan booqdayaasha Malaysia waxay leeyihiin joogitaan wanaagsan oo aan dhacdooyin lahayn.
Waxaa jiray warbixino xoogaa ah jeeb-jeebyo iyo tuugo lafa-goosad ah oo magaalooyinka waaweyn qaarkood sida Kuala Lumpur, Petaling Jaya iyo Johor Bahru. Feejignaan guud ahaan, waligaa boorsooyinkaaga ha ku qaadin dhinaca wadada u jeedka marwalbana ku soco adigoo wajahaya taraafikada soo socota. Intaa waxaa sii dheer, dhawr fiit ka sii dheer ka sii fogow waddooyinka. Haweenka safraya waa inay taxaddar dheeri ah sameeyaan habeenkii.
Johor Bahru waxaa lagu yaqaanaa inuu leeyahay heer xad dhaaf ah marka loo eego Malaysia inteeda kale, iyo dhaca hubaysan iyo dhaca loo geysto ayaa habeenkii ka dhici kara aagaga magaalada. Dukumiintiyada safarka iyo waxyaabaha qiimaha leh waxaa ugu fiican in lagu keydiyo hudheel ammaan ah.
Malaysia gudaheeda, dambiyada qaar waxaa lagu ciqaabaa bakoorad. In lagugu xukumo kufsi, wax dumis, galitaan sharci daro ah, laaluush, siyaado bixinta fiisadaada, iyo danbiyada kale qaarkood ayaa kugu kalifin kara. Tani dharbaaxo maleh curcurka! Faalig ka soo baxa bakooradda qafilan ee rattan ayaa ah aad u xanuun badan, waxay qaadan doontaa xoogaa waqti ah si ay u bogsato oo laga yaabo inay nabar kaaga tagto joogto ah. Farsamadan ayaa sidoo kale lagu dabaqay Singapore.
Khiyaanada kaararka amaahdu waa dhibaato ku soo kordhaysa dalkan, khaasatan haddii aad ka dalbatid dukaan on-line ah intaad joogto. U isticmaal kaararka deynta kaliya dukaamada sumcadda leh. Haddii aadan hubin sumcadda tukaan ama adeeg gaar ah, waxaa jira adeegyo dhowr ah oo la heli karo kuwaas oo kaa caawin kara in lagu garto khayaanada iyo khiyaanooyinka sida Trustedcompany.com ee adeeg kasta oo khadka tooska ah ay rabaan inay adeegsadaan.
Weligaa ha keenin wax daawooyin madadaalo ah Malaysia, xitaa adigoo rakaab ah. Haysashada xitaa qaddarka ugu yar waxay u horseedi kartaa a khasab ah xukun dil ah.
In kasta oo ayna u xumayn sida Thailand, Vietnam ama Indooniisiya, haddana musuqmaasuqu weli waa arrin muhiim ka ah Malaysia. Booliska taraafikada ayaa lagu yaqaan inay jiidaan wadayaasha gawaarida si ay u weydiistaan ​​laaluush dhan RM100-200; tani waxay u egtahay inay ku dhacdo xoogaa marar badan kuwa baabuurta wada SingaporeGawaarida diiwaangashan (oo lagu aqoonsan karo taarikada gawaarida). Si kastaba ha noqotee, waxaa jiray xoogaa xakameyn ah tan, iyo laaluushka waxaa lagu ciqaabi karaa ilaa 20 sano oo xabsi ah. Qof kasta oo iskudaya inuu laaluusho saraakiisha dowladda waa laga qabqabanayaa isla goobta oo waxaa lagu ridayaa meel lagu xidho habeenkii si loogu qaado dambiga subaxa hore. Haddii tani dhacdo Jimce ama habeennada ciidaha guud, waxaad arki doontaa naftaada dhawr habeen oo aad ku dhex jirto qolka qufulka maadaama maxkamaduhu furan yihiin Isniinta ilaa Jimcaha. Ha u oggolaan inay kaa hor istaagto inaad codsatid caawimaad - guud ahaan booliska Malaysia ayaa caawiya dalxiisayaasha.
Kastamka iyo saraakiisha socdaalka guud ahaan waa kuwo nadiif ah, kana duwan dalal kale oo dhaca Koonfur-bari Aasiya, in lagaa codsado inaad laaluush siiso si baasaboorkaaga loo shaabadeeyo waa wax aan weligood maqal, xitaa xuduudaha dhulka. (Socdaalka Thai ee dhinaca kale ee soohdinta waa sheeko kale). Hubi baasaaboorkaaga intaadan kaxaysan gaariga markaad ka soo galayso dhulka Singapore xadka inkasta oo saraakiisha socdaalka lagu yaqaanay inay “iloobaan” inay dadka ku dhuftaan, waxaadna muteysan doontaa ganaaxyo dhowr kun oo ringgit ah si sharci darro ah oo lagu soo galo markaad isku dayayso inaad ka baxdo Malaysia haddii baasaboorkaaga uusan ku shaabadaysnayn gelitaanka.
Khamri-wadiddu waa dambi culus oo tijaabooyinka neefsashada ee bilaysku waa wax caadi ah.
Markaad lugaynayso, taxaddar marka aad waddada marayso. Gawaarida badanaa wey iska indhatirayaan isgoysyada dadka lugeynaya (zebra). Si kastaba ha noqotee, warbixinnada ku saabsan cagajuglaynta waddooyinka inta lagu jiro shilalka wali waa wax caadi ah, markaa haddii aad shil gasho aad uga taxaddar markaad gorgortanayso ama garaac 999 caawimaad.
Tagaasida Koota Kinabalu
Taksiyo badan ayaa diidi doona inay isticmaalaan mitirka, inkasta oo ay jirto qiime rasmi ah. Tagaasida badankood hadda waxay wataan warqad yar oo albaabka dambe ah iyagoo ogeysiinaya dalxiisayaasha in aan la oggolaan karin jabsiga guryaha. Wadayaasha tagaasida, iyagoo dareemaya inaad tahay dalxiis, ayaa laga yaabaa inay baabuur wataan oo ay maraan waddo aad u dheer si ay u gaaraan meesha aad u socoto.
Haddii aad tagsi isticmaaleyso xilli dambe habeenkii, waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo adeegga dial-a-taksi maadaama ay jireen dhacdooyin halkaas oo tagaasida ay saacadahaas calanka u taagnaayeen been abuur / diiwaangelin la'aan. Taksiilaha aan diiwaangashanayn ayaa markaa dhici kara ama weerari kara dhibanayaashooda isagoo gacan ka helaya kuwa weerarka soo qaaday. Waxaad sidoo kale u badan tahay inaad hesho taksi mitir ah adigoo mid ka mid calan ku calaamadeeya halkii aad tagsi ka istaagi lahayd
Ma lagugula talinayaa inaad barato khariidadaha oo aad isbarbar dhigto qiimayaasha internetka kahor booqashada wadanka. Ogaanshaha masaafada u dhexeysa meelaha ayaa waxtar leh marka aad la xaajooneyso darawallada tagaasida. Ma isku dayi doonaan inay nacasiyaan xitaa shisheeyaha oo si cad u muujiya inuu ogyahay masaafada laga soo bilaabo barta A ilaa dhibic B waa 50 km oo ma aha 150 km.
Ha aqbalin sicirka ugu horreeya ee safarada magaalooyinka dhexdooda baabuur ay bixiyaan hudheelada, maxaa yeelay kuwani waxay noqon karaan kuwo labanlaab ah qiimaha caadiga ah. Xaaladdan oo kale, si toos ah ula hadal wadaha taksi si aad u hesho qiimo ka wanaagsan oo caddaalad ah (tusaale ahaan, hudheel u dhow Balok Beach, oo aan aad uga fogeyn Kuantan, ayaa weydiistay 800 RM inuu u raaco Johor Bahru, halka qiimaha wada-xaajoodka lala yeelanayo taksiile. yaa laga heli karaa magaalada hoose ee Kuantan ayaa ku soo dhacday 400 RM oo caadi ah. Laakiin waxaas oo dhan waxaad u baahan tahay inaad ogaato masaafada saxda ah iyo haddii ay suurtagal tahay xitaa safarka saxda ah ee u dhexeeya safarkaaga iyo imaatinkaaga.
Banaanbaxyada dadweynaha ayaan ku cusbayn gudaha Malaysia sababo la xiriira rabshadaha booliska. Hadday mid dhacdo waxaa loola dhaqmi karaa qaab gacan culus, sidaas iska ilaali iyaga kharash kasta.
Ugu dambeyntiina, guud ahaan looma oggola dadka aan Muslimka ahayn ama kuwa aan Sunniyiinta ahayn in ay diinta ka beddelaan. Gaar ahaan isku dayga ah inaad ka dhaadhiciso muslimiinta inay diinta ka baxaan waa sharci daro, hadii lagugu qabto adiga oo waxaas sameynaya, sida ugu fiican wadanka waa lagaa saari doonaa.
Booqo isbitaal ku yaal Malaysia
Biyaha waa la cabi karaa si toos ah tuubada, sida loo daaweeyay, laakiin xitaa dadka deegaanka ayaa karkaraya ama sifeeya marka hore kaliya inay ahaadaan dhinaca badbaadada. Markaad safreyso waxaa fiican inaad ku dhegto biyaha dhalada ku jira, oo aad qaali u ah.
Barafka ku jira cabitaanada waxaa laga sameyn karaa biyaha tuubada laakiin maalmahan, makhaayadaha badankood iyo xitaa meheradaha wadada dhinaceeda waxay isticmaalaan noocyo kala duwan oo leh tubo godan oo dhexda ka xigta oo si ballaaran loogu soo saaro warshadaha barafka oo ka badbaado fiican in la cuno.
Daalka kuleylka waa dhif, laakiin isticmaal cabitaanno fara badan, isticmaal koofiyad iyo shaashadda qorraxda iyo qubeyska badanaa!
Jasiiradda Maleysia inta badan mala-awaal ahaan, laakiin halista ugu weyn ayaa ka jirta Borneo gaar ahaan gudaha iyo baadiyaha. Cudurka 'Dengue fever' wuxuu ka dhacaa guud ahaan dalka Malaysia magaalooyinka iyo miyiga labadaba, waxaana looga hortegi karaa oo keliya iyadoo laga hortago qaniinyada kaneecada. Kaneecada gudbisa quudinta dengue maalintii oo dhan, waana tan ugu firfircoon marka la gaaro subaxa iyo makhribka. Haddii aad isku aragto qandho lama filaan ah oo xannuun iyo caajis, isla markiiba raadso daryeel caafimaad. Aspirin iyo ibuprofen waa in aan la isticmaalin ilaa meesha laga saarayo qandhada dengue. Kuwa kaneecada celiya (ubat nyamuk) ayaa si ballaaran loo heli karaa. Ka taxaddar xirmooyinka kaneecada, oo si fudud u bilaabi kara dabka: ku dheji saxan ama dusha kale ee aan ololi karin oo bakhtii ka hor hurdada.
Cariiri ka timaadda dhirta dabka ku shubta ee dalka deriska la ah ee Indooniisiya ayaa laga yaabaa inay yimaadaan oo ay baxaan iyada oo aan digniin laga helin bilaha Maajo ilaa Ogosto sidaa darteed socotada qaba cudurrada neefsashada waa inay yimaadaan iyagoo diyaarsan.
Inta badan musqulaha dadweynaha ayaa lacag yar bixiya (guud ahaan inta udhaxeysa RM0.20-RM2.00, badanaa waxay kuxirantahay heerka xarumaha) marka xoogaa isbadal dabacsan gacanta ku dhig. Haddii xaaladda musqulaha fadhiga ay su'aal ka taagan tahay, isticmaal musqulaha fadhiidka ah beddelkeeda - labadaba badanaa waa la heli karaa, qaarna waxay aaminsan yihiin in kan dambe uu nadaafad badan yahay iyo (haddii aad la qabsan karto) ay la mid yihiin sida ugu fudud ee loo isticmaalo musqulaha fadhiya.
Jasiiradda Malaysia ayaa inta badan ka madax bannaan dhulgariir maaddaama aysan jirin cilado u dhow, in kasta oo gariir mararka qaarkood la dareemi karo marka uu dhulgariir weyn ka dhaco dalka ay deriska yihiin ee Indonesia. Bariga Malaysia, dhanka kale, gaar ahaan aagga ku xeeran Mount Kinabalu, waxaa mararka qaar la kulma dhulgariirro (sida midkii dhimashada ahaa ee dhacay 2015). Duufaannada sidoo kale guud ahaan ma dhacaan. Si kastaba ha noqotee, xilliga monsoon-ka ee Noofambar-Jan inta badan wuxuu keenaa daadad roobab mahiigaan ah awgood, waxaana la ogyahay inay go`doomin, gaar ahaan Xeebta Bariga. Tsunamis waa dhacdo naadir ah, in kastoo Penang iyo dhowr jasiiradood oo ku yaal waqooyiga Xeebta Galbeed waxaa ku dhuftay tsunami sumcad xumo 2004.
Heerka daryeelka caafimaad ee Malaysia guud ahaan wuu sarreeyaa, Malaysiana waxay si xawli ah ugu soo muuqaneysaa inay tahay meel caan ku ah dalxiiska caafimaadka, iyadoo kharashyada daaweynta guud ahaan aad uga jaban kuwa deriska ah. Singapore iyo wadamada reer galbeedka. Ku dhowaad dhammaan dhakhaatiirta Malaysiya waxay awoodaan inay si wanaagsan ugu hadlaan Ingiriisiga, halka inta badan shaqaalaha kale ee caafimaadka ay awoodaan inay ku hadlaan ugu yaraan Ingiriis aasaasi ah.
Xarumaha daryeelka caafimaad ee dawladu way jaban yihiin laakiin way fiican yihiin, in kasta oo ay u badan yihiin shaqaale yari sidaas awgeedna, waqtiga sugitaanku waa dheer yahay. Waqtiyada sugitaanka oo yar awgood iyo mararka qaarkood heerarka raaxada ee hudheel la mid ah, qurbajoogta iyo martida badankood waxay doorbidaan inay raadsadaan daryeel caafimaad oo gaar loo leeyahay. Kooxaha daryeelka caafimaad ee gaarka loo leeyahay ee Malaysia waa Parkway Pantai, oo ka shaqeysa silsiladaha caanka ah ee 'Gleaneagles' iyo silsiladaha isbitaalka Pantai, iyo Daryeelka Caafimaadka ee KPJ. Kharashyada caafimaad ee gaarka loo leeyahay way sarreeyaan oo caymiska safarku waa fikrad aad u wanaagsan.
Heerka HIV-ga ee Malaysia wuxuu ahaa 0.5% tirada dadweynaha sanadkii 2014.
Waxaa lagugula talinayaa inaad uxirto si xushmad leh, qaasatan meelaha miyiga ah (xirashada surwaal ama goono dheer, ma ahan gaab iyo inaad garbahaaga daboosho ayaa lagugula talinayaa laakiin muhiim maahan). In magaalooyin badan oo cosmopolitan ah sida Kuala Lumpur, George Town, Malacca iyo Ipoh, iyo waliba dawladaha bariga Malaysia (Sabah iyo Sarawak) dabeecadaha ayaa xoriyad badan. Haweenka sharci ahaan looma baahna inay xidhaan xijaabka, oo looga yaqaan gudaha tudung, marka laga reebo marka la galayo masaajidda, halkaas oo looga baahan yahay muslimiin iyo gaalo labadaba.
Sida dalal badan ka jira, waxaa ugu wanaagsan in aan lagu cambaareynin dowladda ama qoysaska reer boqor ee reer Malaysia booqasho ahaan. Waxaad maqli kartaa dadka reer Malaysia oo dhaleeceynaya dowladdooda, laakiin uma baahnid inaad dhinac la safatid; kaliya dhageyso oo xorriyad uga hadal dareenkaaga ku saabsan dowladdaada. Ku bumiputera siyaasad (sharciyada siineysa qowmiyadaha Maleesiya xuquuq gaar ah oo aan la siinin jinsiyadaha kale) waa arin aad u kala qeybsanaan badan oo xasaasi ah, waxaana ugu wanaagsan in laga fogaado mowduuc wadahadal
Markii aad gelayso guri ama goob cibaado, markasta kabaha iska siib (tan waxaa badanaa looga baahan yahay hoteelada sidoo kale). Sidoo kale, waligaa ha ku cunin gacantaada bidix ama ha ku bixin hadiyad gacantaada bidix, hana waligaa far ha ku fiiqin fartaada (waxaad u isticmaali kartaa feer xiran suulka halkii). Ha ku tilmaamin cagahaaga ama ha taaban qofka madaxa sidoo kale.
Swastikas waxaa badanaa lagu arkaa macbudyada Hinduuga iyo Buddhist, waxaana loo arkaa inay astaan ​​diimeed u yihiin bulshooyinkan. Waxay si xoogan u sameeyaan ma waxay matalayaan Nazism ama Yuhuud naceyb, marka martida reer galbeedka waa inaysan dareemin xumaan markay ku arkaan guryaha martida loo yahay.
Maaddaama ay tahay waddan muslimiin u badan, Malaysia waxay u egtahay mid ilaalinaysa galmada. Muujinta dadweynaha ee kalgacalka magaalooyinka kala geddisan, waa weyn waa loo dulqaadan karaa laakiin waxay ku martiqaadi kartaa dareenka dadweynaha ee aan loo baahnayn. Meelo badan oo miyi ah iyo gobollo aad u muxaafid ah sida Kelantan iyo Terengganu oo ku taal Xeebta Bari ee Jasiiradda Peninsula waa laga xumaaday waana la iska ilaaliyay.
Magaalooyinka waaweyn sida Kuala Lumpur leeyihiin muuqaal qaniis ah oo firfircoon oo jinsi ahaanta loo galmoodo si dhif ah ayaa loo maqlaa. Si kastaba ha noqotee, cilaaqaadka dadka isku jinsiga ahi waa mowduuc la mamnuucay oo "Galmada ka soo horjeedda amarka dabeecadda" waxaa lagu ciqaabayaa ilaa 20 sano oo xarig ah iyo karbaash (ragga kaliya) marka loo eego sharciyadii xilligii gumeystaha oo aan inta badan lagu fulinin ogolaanshaha qaan-gaarka ragga iyo dumarka Gobollo kala duwan ayaa sidoo kale soo rogi kara oo isku xiga ciqaabta shareecada islaamka ee gaareysa ilaa 3 sano iyo lix jeedal oo ka dhan ah muslimiinta noocyadooda kala duwan.
Ku xirnaanta internetka ee Malaysia waa mid si fudud looga heli karo magaalooyinka iyo magaalooyinka badankood. Waxay ahayd mid ka mid ah waddammada ugu horreeya adduunka ee bixiya isku xidhka 4G. Broadband Internet waxaa laga heli karaa hudheelada badankood, makhaayadaha internetka, iyo maqaayadaha qaarkood. Wi-Fi waxaa badanaa laga helaa meelaha kulul ee ku dhowaad dhammaan maqaayadaha iyo meelaha cuntada lagu kariyo iyo suuqyada laga dukaameysto. Kaararka internetka ee horay loo bixiyay ayaa sidoo kale loo heli karaa si loogu isticmaalo qadka qadka qadka, meelaha laga qaxweeyo qaarkood.
Macaamiisha ayaa badanaa bixiya RM1-5 saacadiiba adeegyada internetka ee internetka (waxay kuxirantahay magaalada aad ku sugan tahay). Xidhiidhka internetka ee laga bixiyo makhaayadaha iyo makhaayadaha badanaa waa bilaash, meelo badan oo cuntada ka mid ahna way bixiyaan tan. Kuwaas waxaa ka mid ah dhammaan Starbucks iyo Coffeebean, qaar ka mid ah McDonald's iyo Subway, iyo tiro sii kordheysa oo meelo yaryar ah.
Lambarka waddanka ee Malaysia waa + 60.
Waababka taleefanka ee Sabah
Khadadka taleefanka guryaha
Nambarada taleefanka guryaha ee Malaysia waxay leeyihiin ama toddobo ama siddeed lambar. Waddanku wuxuu sidoo kale u qaybsan yahay aag loo qoondeeyey laba ama saddex lambar nambarro ah, kuwaas oo ay tahay in la garaaco markii laga soo wacayo meel ka baxsan aagga. Xeerarka aagagga waa:
03 - Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor (dhammaantood waa Klang Valley), Pahang (Genting Highlands oo keliya)
05 - Perak, Pahang (Cameron Highlands oo keliya)
06 - Malacca, Johor (degmada Muar oo keliya), Negeri Sembilan
07 - Johor (degmooyinka oo dhan mooyee Muar)
082 - Sarawak (Degmooyinka Kuching iyo Samarahan)
083 - Sarawak (Sri Aman iyo Betong degmooyinka)
084 - Sarawak (Sarikei, Sibu iyo galbeedka Kapit degmooyinka)
085 - Sarawak (degmooyinka Miri iyo Limbang)
086 - Sarawak (degmooyinka Bintulu iyo Belaga)
087 - Sabah (Qaybta Gudaha), Labuan
088 - Sabah (Xeebta Galbeed iyo Qaybta Kudat)
089 - Sabah (Sandakan iyo Tawau Division)
09 - Kelantan, Pahang (dhammaan degmooyinka marka laga reebo Genting Highlands), Terengganu
Nambar nambar 02 ayaa loo qoondeeyay wicitaanada laga sameeyay Malaysia ilaa Singapore. Tan macnaheedu waa inaan loo baahnayn wicitaan Singaporelambarka waddanka 65 markaad ka soo wacayso Malaysia. Wicitaanka tooska ah ee caalamiga ah (IDD) ee ka soo wac khadadka taleefannada guryaha ee dhammaan waddamada kale waa inay isticmaalaan horgalaha 00 oo ay ku xigto lambarka waddanka.
Si aad u wacdo lambar Malaysia ah:
Ka yimid dibedda marka laga reebo Singapore garaac lambarka marin-u-helka caalamiga ah, lambarka waddanka ee Malaysia, lambarka aagga oo aan lahayn "0", ka dibna lambarka taleefanka.
Ka yimid Singapore garaac 02, nambarka aagga ee "0", ka dibna lambarka taleefanka.
Ka baxsan banaanka deegaanka garaac lambarka aagga oo buuxa, oo ku xiga lambarka taleefanka. Ma jiraan waxyaabo ka reeban sharcigan, marka laga reebo marka la isticmaalayo taleefanka gacanta.
Laga soo bilaabo aagga deegaanka kaliya garaac lambarka taleefanka adiga oo aan lahayn wax lambar ah.
Malaysia sidoo kale waxay leedahay afar shirkadood oo bixiya adeega taleefanka gacanta, Maxis, DiGi, Celcom, iyo U Mobile kuwaas oo adeegsada nambarada 012, 013, 014, 016, 017, 018, 019. Isku xirka shabakada ee Malaysia waa mid aad u fiican. Xayeysiinta nambarka mobilada waxaa laga hirgeliyay Malaysia, taasoo la micno ah lambar sida 012 oo dhaqan ahaan lahaa Maxis, wuxuu hadda noqon karaa macmiil DiGi ah. Shabakadaha mobilada ayaa adeegsada nidaamyada GSM 900 iyo 1800. 3G (WCDMA), shabakadaha EDGE & HSPDA oo laga heli karo magaalooyinka waaweyn. Meertada caalamiga ah ee shabakadahaan waa suurtagal haddii hawlwadeenkaagu oggolaado. Kaararka SIM-ka ee horay loo bixiyay iibka garoomada diyaaradaha waa kuwo la awoodi karo; kaarka SIM-ka ee hal toddobaad leh qaddar wanaagsan oo xog ah ayaa laga yaabaa inuu ku kaco RM20-30 (2019).
Si aad u wacdo nambarka mobilka ee Malaysia:
Ka yimid dibedda garaac koodhka marin-u-helka caalamiga ah, lambarka waddanka ee Malaysia, nambarka bixiyaha taleefanka gacanta oo aan lahayn "0", ka dibna lambarka taleefanka.
Laga soo bilaabo gudaha Malaysia garaac lambarka bixiyaha lambarka "0", ka dibna lambarka taleefanka.
Laga soo bilaabo taleefanka gacanta ilaa taleefanka gacanta ee Malaysia dhexdeeda garaac lambarka bixiyaha lambarka "0", ka dibna lambarka taleefanka. In kasta oo aad iska tuuri karto lambarka adeeg bixiyaha haddii labada taleefanno ay wadaagaan hal adeeg bixiye, weli waad sii gudbi doontaa haddii lambarka adeeg bixiyaha la garaaco.
Si aad uga wacdo Malaysia una aado wadan kale:
Khadka telefoonka garaac lambarka furaha caalamiga ah ee "00" oo ay ku xigto lambarka waddanka iyo lambarka taleefanka. Tusaale ahaan, ka wacitaanka Mareykanka ee Malaysia waxaad wici doontaa 001 oo ay ku xigto lambarka aagga Mareykanka iyo lambarka taleefanka. Shabakada Maxis, ka faa'iideyso 50% qiimaha IDD adoo adeegsanaya IDD132, oo aan u baahnayn wax diiwaangelin ah, kaliya garaac "132" kahor "00".
Laga soo bilaabo taleefanka gacanta la mid ah ka khadka taleefanka guryaha (kor). Hab kale, oo ka fudud, habka mobilada badan ayaa ah inaad riixdo & qabato badhanka eberka si aad uhesho "+" (oo lagu daray calaamadda) kahor lambarka waddanka iyo lambarka taleefanka. “+” Wuxuu matalayaa (waddan kasta) koodhka marin-u-helka caalamiga ah ee ku habboon. Shabakada Maxis, ka faa'iideyso 50% qiimaha IDD adoo adeegsanaya IDD132, oo aan u baahnayn wax diiwaangelin ah, kaliya garaac "132" kahor "00", hana u isticmaalin astaamaha "+" adoo adeegsanaya qaabkan.
Adeegyada boostada ee Malaysia
Adeegyo badan oo waraaqo caalami ah sida Fedex, DHL iyo UPS ayaa laga heli karaa magaalooyinka iyo magaalooyinka laakiin bixiyaha ugu weyn ee boostada bixiya waa Pos Malaysia oo si kalsooni leh u siiya adeegyo boosta dalal badan oo adduunka ah.
Qiimaha boostada ee Malaysia waa mid jaban. Aad uga raqiisan Thailand, Singapore ama Fiyatnaam, iyo dusha sare ayaa sidoo kale la heli karaa. Intaas waxaa sii dheer boostada oo lagu kalsoonaan karo. Markaad dhajineyso, ha daboolin sanduuqa. Tani waa in la oggolaado in la baaro haddii alaab sharci darro ah sidan lagu dhajiyo.
Beddelka maxalliga ah ee shirkadaha dusha sare ee caalamiga ah ee kor ku xusan waa Pos Laju, oo bixiya adeeg la isku halleyn karo laakiin qayb ka mid ah kharashyada!
Waraaqaha aan degdegga ahayn iyo kaararka boosta waxaa lagu ridi karaa sanduuqyada boostada gudaha xafiisyada boostada ama sanduuqyada casaanka ah ee laga helo bannaanka xafiisyada boostada iyo waddooyinka waaweyn. Haddii ay jiraan labo boos sanduuqa boostada isticmaal midka ku qoran "lain lain" boostada caalamiga ah.
Xafiisyada boostadu waa furan yihiin M-Sa 08: 00-17: 00 marka laga reebo ciidaha dadweynaha, in kasta oo in yar oo ka mid ah dooxada Klang ay furan yihiin illaa 22:00. Gobollada Kedah, Kelantan, Johor iyo Terengganu way xiranyihiin Jimcaha iyo ciidaha.
Meelaha Xalaal ee ugu sareeya Malaysia
eHalal Safarka Mart > Safarka Xalaasha ee Malaysia
Hagaha Socdaalka Xalaasha ah